NEWS COLLECTION: July 2012
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့သို့ ယနေ့နေ့လယ်က ရောက်ရှိလာသော ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့် အရေး အထူးစုံစမ်း စစ် ဆေးရေးမှူး မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တာနာကို ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၂၀၀ ခန့်က ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားပါ”၊ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အချာ အာဏာကို လေးစားပါ”၊ “တိုင်း ရင်းသားတို့၏ လူ့အခွင့် အရေးကို လေးစားပါ”၊ “မျှမျှတတ ဆက် ဆံပါ” ဟူသော တောင်းဆိုချက် ဆိုင်း ဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ထားသူများက ကင်တာနာ၏ ယဉ်တန်း ဘေးဝဲယာမှ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“မစ္စတာ ကင်တာနာ ဒီကို ၁ နာရီလောက်မှာ ရောက်တော့ ရခိုင်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ၂၀၀ လောက် ရှိမယ်ခင်ဗျ။ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကိုင်ထားကြ တယ်။ အလံတွေ ကိုင်ထားကြတယ်။ အပြင်က ရပ်ကြည့်နေတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆို ရင်တော့ လေး ငါးရာလောက်ရှိမယ်ခင်ဗျ”ဟု ဒေသခံ မျက်မြင် သက်သေ တဦးဖြစ်သည့် ကိုကျော်အေးမောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မစ္စတာ ကင်တာနာနှင့် အဖွဲ့သည် မောင်းတောမြို့သို့ ရဟတ်ယာဉ် ၂ စီးဖြင့် ယနေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီခန့်က ရောက်လာကြောင်း၊ မစ္စတာ ကင် တာနာ၏ ယာဉ်တန်းအား သဇင် တည်းခိုခန်းရှေ့လမ်းဘေး ၀ဲယာတွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မစ္စတာ ကင် တာနာက ယာဉ်တန်းပေါ်မှ အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများကို ဓာတ်ပုံနှင့် ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းတင်မှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း၊ ယာဉ် တန်းခရိုင် အုပ် ချုပ်ရေးမှူး ရုံးရှိရာသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများ အေးအေး ဆေးဆေး လူစု ခွဲသွားကြ ကြောင်း သိရသည်။
မစ္စတာ ကင်တာနာနှင့် အဖွဲ့သည် မောင်းတောရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လုံခြုံ ရေး တာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်း အခြေအနေကို မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
မောင်တော ဒေသတွင် ယခုအခါ လုံခြုံရေး တင်ကျပ်စွာ ချထားပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများဘက်ကလည်း မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ မ ပေါ်ပေါက်ရေး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် မောင်းတော မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များတွင် UN (ကုလသမဂ္ဂ) အလိုမရှိ ဟူ သောအကျီ များ ၀တ်ဆင်ထားသူ တချို့ကို မြင်တွေ့ရကြောင်း ကိုကျော်အေးမောင်က ဆိုသည်။
မောင်းတော ဒေသတခွင် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း ဒုက္ခသည်စခန်းများနှင့် ဒေသခံများမှာ အပြန်အလှန် မယုံကြည်မှုများ၊ စိုး ရိမ်မှုများ ကြီးစိုးနေဆဲဖြစ်ပြီး အပြင်ထွက်ကာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြသေးကြောင်း၊ ရိက္ခာအတွက် ဆန်ကို အဓိက လိုအပ်လျှက် ရှိ ကြောင်း ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားများက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ အပါအ၀င် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အသင်းအဖွဲ့များက လာရောက်လှူဒါန်းမှုများ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဂျာနယ် ၂ စောင်ကို အကန့်အသတ်မရှိ ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်း
ရန်ကုန် အခြေစိုက် The Voice ဂျာနယ်နှင့် Envoy ဂျာနယ် တို့ကို ပြန် ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန စာပေစိစစ်ရေးက ယနေ့မှစ၍ ထုတ်ဝေခွင့် ရက် အကန့်အသတ် မရှိ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
စာပေစိစစ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးတင့်ဆွေက ၂၀၁၁ ခုနှစ် ညွှန်ကြားချက် ၄၄ ကို ဖောက်ဖျက်မှုနှင့် ယင်း ဂျာ နယ်များ ကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ရန်ကုန် စာပေစိစစ်ရေးဌာနတွင် ကျင်းပပြုလုပ် သော သတင်းစာ ရှင်း လင်း ပွဲ၌ ပြောဆိုလိုက်သည်။
“နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်တယ်လို့ မယူဆ စေချင်ပါဘူး။ The Voice ဂျာ နယ်က စာပေစိစစ်ရေး ကို မတင်ပြဘဲ သတင်း ၈ပုဒ် ထည့်သွင်း ခဲ့ သလို၊ Envoy ဂျာနယ်က သတင်း ၇ ပုဒ်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖော်ပြ ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ စည်း ကမ်း ချိုးဖောက်မှု တွေ ကလည်း အများ ကြီးပါ။ ဒါတွေ တော့ ကျနော် မပြောတော့ပါဘူး” ဟု ဦးတင့်ဆွေက ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက ယခုကာလသည် စပ်ကူးမတ်ကူးကာလဖြစ်ပြီး သတင်းများ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ပြုနိုင်သော ကာလ မဟုတ် သေး ကြောင်း၊ လတ်တလော အချိန်အထိ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ် အက်ဥပဒေသည် အသက်ဝင်နေဆဲ ဖြစ်သောကြောင့် သတင်းဂျာ နယ်များ အားလုံး အနေဖြင့် စာပေ စိစစ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
ပုံနှိပ်မီဒီယာ အက်ဥပဒေကိုလည်း ရေးဆွဲလျှက်ရှိပြီး ယခုအခါ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက စိစစ်ပြီး ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခိုင်း ထားကြောင်း၊ ပြင် ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီး ရှေ့နေချုပ်ရုံးထံ ပြန်လည်ပေးပို့ကာ မကြာခင် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း သူက ဆက် ပြောသည်။
ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ်များ အနေဖြင့် အခြေအနေကို နားလည်ကြ စေလိုကြောင်းနှင့် စာပေ စိစစ်ရေးဌာနကနောက်ကြောင်း ပြန် လှည ခြင်း မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ခွင့်မပြုနိုင်သော သတင်းများကို ထည့်သွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျာနယ်နှစ်စောင်ကို ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်းရာ တွင် ၀န်ကြီးဌာနကို အဆင့်ဆင့် တင်ပြခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးတင့်ဆွေက ဆိုသည်။
ဦးတင့်ဆွေက မည်သည့် သတင်းကြောင့် ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်းသည်ကို ရှင်းလင်း ပြောဆိုခြင်း မရှိသော်လည်း စာပေ စိစစ်ရေးမှ စာစစ် မှူး များ၏ ထင်မြင်ချက်အရ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းလင်းနှင့်တရုတ်သ တင်းစာ တစောင်၏ အင်တာဗျူးကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖော်ပြသောကြောင့် Envoy ဂျာနယ်ကို အရေးယူသည်ဟု သိရသည်။
The Voice ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေကလည်း ၎င်း၏ facebook စာမျက်နှာတွင် “အဓိက အချက်ကတော့ ကျနော့် အထင် အခုနောက်ဆုံး ထွက်ထားတဲ့ စာစောင် မျက်နှာဖုံးသတင်း ၂ ပုဒ်ကြောင့်လို့ ဖြစ် မယ်။ တပုဒ်က ဝန်ကြီး အပြောင်း အရွှေ့သတင်းနဲ့ ကာတွန်း ပြပွဲမှာ အပယ်ခံရတဲ့ပုံကို စာပေစိစစ်ရေးက လာစစ်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ကာ တွန်းပြပွဲ သတင်းပါ။ လောလောဆယ်တော့ ဘယ်လောက် အပိတ်ခံ ရမယ် ဆိုတာ မပြောနိုင် သေးဘူး” ဟု ရေးသားထား သည်။
The Voice ဂျာနယ်နှင့် Envoy ဂျာနယ်ကို ပိတ်ပင်သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်း အခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာအသိုင်းအ၀န်းက နောက် ပြန်လှည့်သော လုပ်ရပ်အဖြစ် ဝေဖန်နေကြသည်။
“ရှေ့က ဂျာနယ်တွေပြီးတော့ ကိုယ့်အလှည့် ဘယ်တော့လာမလဲလို့ ခံစားရနေရတယ်” ဟု Venus News Weekly ၏ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ကိုလှိုင်းသစ်ဇင်ဝေက ဆိုသည်။
ပြည်တွင်း သတင်းစာဆရာ တဦးကမူ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း၏ အမိန့်ဖြင့် ဂျာနယ်များ ပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်း လဲမှု ခရီး မတွင်သည်ကို လက်တွေ့ပြသည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ပြောသည်။
“အားလုံး ထင်ထားတာက ဦးကျော်ဆန်း ပြုတ်တော့မယ် ဆိုတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီဂျာနယ်တွေ ကို ပိတ်ပင် ပြလိုက်တာက သူ ရှိနေသေး တယ်၊ သူက သြဇာပါဝါ ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြလိုက်တာပဲ” ဟု အဆိုပါ သတင်းစာ ဆ ရာက သုံးသပ်သည်။
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ကိုလည်း ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ပင်ထားရာ ယခုလက်ရှိ အစိုးရလက်ထက်တွင် အပိတ်ပင် ခံထား ရသော သတင်းဂျာနယ် ၃ စောင်အထိ ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
ပိတ်ပင်ခံထားရသော သတင်းဂျာနယ်များအနက် လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်နှင့် The Voice ဂျာနယ်တို့မှာ တရားရုံးတွင် အမှု ရင်ဆိုင်နေရ သော ဂျာနယ်များ ဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာသို့ ရောက်ရှိနေသော ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ထံ ရခိုင် အမျိုး သမီး အစည်းအရုံးမှ စာပို့
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသာ ကုလ သမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တေးနားထံသို့ ဒက္ကားအခြေစိုက် ရခိုင်အမျိုးသမီး အစည်း အရုံးမှ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့က စာတစ်စောင်ရေးသား ပေးပို့လိုက်သည်။
စာရေးသား ပေးပို့ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသမီးများ အစည်းအရုံး (RWU) ဥက္ကဌ ဒေါ်စောမြ ရာဇာလင်းက နိရဉ္စ ရာသို့ ပြောသည်။
“ တချို့ချို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်း မီဒီယာတွေမှာ ရေး သား နေကြတာတွေဟာ တဘက် စောင်းနင်း ဖြစ်နေတာတွေကို တွေ့နေရတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ သူတွေကို အထူး ဦးစားပေးပြီး အဖြစ် မှန်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ဘယ်သူက လုပ်လို့ ဘယ်သူက အများကြီး ဒုက္ခ ရောက်နေရသလဲ။ ရခိုင်တွေဟာ ဘာကြောင့် ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့် မြေမှာ အေးအေး ချမ်းချမ်း မနေနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေရသလဲဆို တာကို ကမ္ဘာ့ ပြည်သူတွေ သိရှိ အောင် ဖေါ်ထုတ်ဖို့အတွက် အစီရင် ခံစာ တွေကို ဘက်မလိုက်ဘဲ အမှန် တရားဘက်က ရပ်တည် ရေးပေးဖို့ ကင်တားနာ ကို တောင်း ဆိုရတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ကနေ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျ မှန်ကန်သော အစီရင် ခံစာ မျိုး ထွက်လာပါမှ ကမ္ဘာပြည်သူများ အနေဖြင့် အဖြစ်မှန်ကို သိရှိကြမည် ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းကဲ့သို့ အစီရင်ခံမျိုးကို ဘက်မလိုက်ဘဲ ရေးသား ပေး ရန်လိုအပ် သဖြင့် မစ္စတာ ကင်တားနားကို တောင်းဆိုရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူမက ဆိုသည်။
အဆိုပါ တောင်းဆိုစာထဲတွင် ရခိုင်ပြည်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အ စည်းများက စိစစ်ပေးဖို့ထည့် သွင်း ဖေါ်ပြထားသည်ဟုလည်း သူမက ပြောသည်။
“ အခု မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင် ဒီမြို့နယ်သုံးခုမှာ ဘာကြောင့် ကျွန်မတို့ ရခိုင်တွေ ဟာ လူများစုကနေ လူနည်းစု ဖြစ်လာရ သလဲ။ အဲဒါဟာ အကြောင်းရင်းရှိတယ်လို့ ထောက်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းရင်းကို အ မှန် တကယ် လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ နောက် ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်မှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ သူတွေ အပြင် တချို့တချို့ လူမျိုးတွေလည်း ကျွန်မတို့ ရခိုင်ပြည်မှာ နေထိုင်လို့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားလူမျိုးတွေနဲ့ ဘာတခုမှ ပြဿနာ မဖြစ်ဘဲနဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး နာမည်ခံနေတဲ့ လူ တွေနဲ့ သာလျှင် ဘာကြောင့် ခုလို သတ်ပွဲရိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေရ သလဲ ဆိုတာကို ကမ္ဘာပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက၊ ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေး ဌာနတွေက အမှန်တကယ် စီစစ်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ ထောက်ပြထားတာ ပါပါတယ်” ဟု သူမက ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာ့ လူအခွင့်အရေး ကော်မရှင်က မှန်ကန်တိကျသော အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ၀ါဒဖြန့်နေကြ သော အခြေအမြစ်မရှိသော သတင်းများကို အဆုံးသတ်စေမည် ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အမှန် တကယ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဖြစ် အပျက် မှန်များကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူတရပ်လုံးက သိရှိလာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည် မျော်လင့်ကြောင်း ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက ပြောသည်။
“ ကျွန်မတို့ မျော်လင့်တာက မစ္စတာ ကင်တားနားသာ ရခိုင်ပြည် အတွင်းမှာ ဒီလောက် လူဦးရေ များ ပြားလာတာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဒီလိုအ ကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ အဖြစ်မှန်တွေ ကို သိသွားလို့ ရှိရင် သူက တဆင့် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအသီးသီးကလည်း သေသေချာချာ သိလာမှာပါ။ အဲဒီလို သိလာလို့ ရှိရင် ရခိုင် ပြည်မှာ ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ဖေါ်ထုတ်လို့ ရနိုင်မယ်လို့ ကျွန်မအနေနဲ့ ယုံကြည်ပါ တယ်” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနား သည် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့မှ သြဂတ်စ်လ ၄ ရက်နေ့အထိ လည်ပတ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပြီး ယနေ့ (ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့) တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီး တောင်၊ မောင်တောသို့ သွားရောက်မည်ဟု သိရသည်။
ကင်တားနားသည် ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ၀န်ကြီးဌာန (၅) ခုမှ တပြိုင်တည်း ပြုလုပ်သေ သတင်းစာရှင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အင်း စိန်ထောင်တွင် ကိုဖြိုးဝေအောင်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း အစိုးရ အရာရှိများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အမျိုးသား လူ့အခွင့် အ ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့များနှင့် လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများအပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုြ
လစ်လပ်နေသည့် ဒု သမ္မတ ရာထူးအတွက် အတည်ပြုခန့်အပ်ရန် ကြန့်ကြာနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအ ကြားဝေ ဖန်ပြောဆိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီသစ် ပါတီမှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က“ဒု သမ္မတလောင်း တယောက်တည်း ကို ဒီ လောက်ကြာအောင်သုံးသပ် စိစစ်စရာ မလိုဘူးထင်တယ်၊ ပထမအကြိမ်တုန်းက သုံးရက် လောက် ပဲကြာတယ်”ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်ကလည်း ဒု သမ္မတ ရွေး ကောက်တင်မြှောက်မှုမှာ လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုကြာမြင့်နေသည်ဟု ထင်ကြောင်း၊ သို့သော် မည်သို့သောအကြောင်းများကြောင့် ကြာ မြှင့် နေသည်ကိုမူ သုံးသပ်ပြောဆိုရန် ငြင်းဆိုသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အကြောင်းကြားစာရသည့်နေ့မှ စတင်ကာ ၂၁ ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ် တော် အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူရမည်၊ ထို့နောက် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့က ဒု သမ္မတ တဦးရွေးချယ် တင် မြှောက် ရေးကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပါရှိသည်။
သို့သော် မည်သည့်အချိန်ကာလတွင် စိစစ်ပြီး အပြီးသတ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်ဟု ကာလသတ်မှတ်ချက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ နှင့် နည်းဥပဒေများတွင် မပါရှိပေ။
ထိုသို့ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် မပါရှိခြင်းကြောင် ဒု သမ္မတ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြန့်ကြာနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအချက် သည် ၂၀ ၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အားနည်းချက်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ကြောင်း RNDP ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန် ကလည်း ထောက်ပြသည်။
“အဲဒီလို အချိန်ကာလကန့်သတ်ချက်တွေ မရှိလို့ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီက သူတို့လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ရတာပေါ့၊ အခုတော့ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေလည်း ဘေးကပဲ ရပ်ကြည့်နေရတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ(ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ)နှင့် စစ်တပ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းတို့သာ ကြီးစိုးနေသည့် လွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အ ခြေခံဥပဒေ၏ အားနည်းချက်များကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လက်တွေ့အခြေအနေအရ မလွယ်ကူကြောင်း ဦးဘရှိန်က ပြော ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေအား ဒု သမ္မတလောင်းအဖြစ် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များမှ သ မ္မတ အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီသို့ တင်သွင်းသည်ဟု ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများတွင် ရေးသားနေသော်လည်း မိမိတို့ လွှတ်တော် ကိုယ် စားများအား တရားဝင် ပြောဆိုခြင်း မရှိကြောင်း ဦးဘရှိန်က ဆက်ပြောသည်။
ယင်းသို့ ဒု သမ္မတ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြန့်ကြာနေခြင်းမှာ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ် သက်နေ ကြောင်း နေပြည်တော်နှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရပ်ကွက်က ပြောဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့က ဒု သမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နုတ်ထွက်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လွှတ်တော်သို့ အကြောင်းကြား ခဲ့ပြီး နောက် ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ ကိုအမည် စာရင်း တင်သွင်းကြောင်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားတချို့ကို ကိုးကားပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများ ကရေး သားခဲ့သည်။
အဆိုတင်သွင်းထားသည့် ဒု သမ္မတလောင်း အရည်အချင်းပြည့်မီမှု ရှိမရှိကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ နှစ် ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး၊အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ဦးဇော်မြင့်ဖေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ဦးဌေးဦးနှင့်တပ်မ တော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်လွင်ဦးတို့ ပါဝင်သည့် ဒု သမ္မတ လောင်း အရည်အချင်းစစ် ကော်မ တီက စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ့ မောင်တောသို့ ရောက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားနှင့် အဖွဲ့သည် ယနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်ကရဟတ်ယာဉ်နှစ်စီးနှင့်အတူ မောင် တောမြို့သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
“ တစ်စီးက ဘော်လုံးကွင်းမှာ ရပ်ထားပါတယ်။ နောက်တစ်စီးက ကညင်တန်း BAG အနီးမှာ ရပ် ထားပါတယ်။ အခုက သူတို့ ခရိုင် အုပ်ချုပ် ရေးရုံးမှာ ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်” ဟု မျက်မြင် ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုအခါ ရခိုင်အမျိုးသား ၅၀၀ ခန့်က ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အား ကြိုဆိုရန် သဇင် တည်းခို ရိပ်သာ အနီးတွင် စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီး တစ် ချို့လည်း ဆိုင်းဘုတ်များ ပိုစတာများကို ကိုင်ဆောင်ထားကြသည်ဟု မျက်မြင်များက ပြော သည်။
၎င်းပိုစတာများတွင် (၁) နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားပါ။ (၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အချာအာဏာကိုလေးစားပါ။ (၃)တိုင်း ရင်းသားတို့၏ လူအခွင့် ရေးကို လေးစားပါ။(၄) မျှမျှတတ ဆက်ဆံပါ ဟု ရေးသားထားသည်ဟု ပြောသည်။
ယခု အချိန်ထိ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ့မှာ ခရိုင်ရုံးမှ ထွက်မလာသေးကြောင်း သိရသည်။
ယခု လက်ရှိ မောင်တောမြို့တွင် လုံခြုံရေး ထူတပ်စွာ ချထားပြီး နေရာတိုင်းကို စစ်တပ်က လုံခြုံရေး ယူထားသည်ဟု သိရသည်။
(သတင်းများ ဆက်လက် ဖေါ်ပြပါမည်။)
KIO မသင်္ကာမှုဖြင့် အစိုးရစစ်သားများ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရသော ယိခူးရွာသား အလောင်း တွေ့ရှိ
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်)မြို့နယ် ယိခူးကျေးရွာမှ ကချင် လွပ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် မသင်္ကာသူဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရသော ဦးဂလောင်းဘောမ်ယော် (Galau Bawm Yaw) သည် ရက်အ တော်ကြာပျောက်ဆုံးနေရာမှ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ၄င်း၏အလောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အစိုးရစစ်တပ်များသည် ဦးဂလောင်းဘောမ်ယော် (Galau Bawm Yaw) အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစဉ် ရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှု အမျိုးမျိုးပြု လုပ်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့သည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ယိခူးဒေသခံတစ်ဦးပြောသည်။
“မြုပ်ထားတဲ့နေရာက အရင်က စစ်တပ်ဟောင်း နောက်ဘက်က ကဒုတ်ကျင်းအရှည်ကြီး လုပ်ထား တယ်။ အဲဒီမှာပဲ.. နည်းနည်းပြန်တူးပြီး မြုပ်ထားတာ။ သူတို့ထမ်းလာတဲ့ ၀ါးတုတ်လည်း အဲဒီမှာ ဖြတ်ထည့်ထားတယ်။ ပေါက်ပြားလည်း ထားထားတယ်။ ပလပ်စတိတ်နဲ့ပဲ လိပ် ပြီးမြုပ်ထားတယ်။ ခေါင်းပိုင်းတော့ အကုန်ပျက်နေပြီ။ ကိုယ်ပိုင်းတော့ ဖောင်းနေတယ်။ ညာဘက် ပေါင်မှာလည်း ရိုက်ချိုးထားတဲ့ အရာ ထင်နေတယ်။ ခြေတစ်လုံးတွေမှာလည်း ရိုက်ထားတဲ့ အရာတွေထင်နေတယ်။ ကိုယ်ပေါ်တွေမှာ လည်း အရာတွေ အရမ်းထင်နေတယ်။ သွေးဥတွေ မဲတူးနေတာပဲ။ ပါစပ်လည်းအရမ်းဟနေတယ်။ တချို့က အရမ်းအော်ပြီး သေသွား တာ လားလို့ ယူဆတာလေနော်။ ဆရာဝန်ခွဲစိတ်ပြီးပြောတာက ဦးနှောက်မှာ သွေးကြောတစ်ကြော ပေါက်တယ်တဲ့” ဟု ပြော သည်။
ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့တွင် အစိုးရစစ်တပ်များနှင့် ကချင်လွပ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့စဉ် အနီးရှိ တောင်ယာလုပ်ကိုင်နေသူ ယိခူး ကျေး ရွာသား ၂၆ ဦးကို KIO နှင့်ပတ်သက်ဆက်သွယ်သူများအဖြစ် စစ်ဆေးမေးမြန်းရန် ပန်ဆိုင်းရဲစခန်းသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရာ ရွာလူကြီး၏ အာမခံချက်ကြောင့် ၂၃ ဦးကို အရင်လွတ်ပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဦးဂလောင်းဘောမ်ယော် (Galau Bawm Yaw) အပါအ၀င် ၃ ဦးကိုမူ အစိုးရစစ်တပ်အခြေချစခန်း သို့ ဆက်လက် ဖမ်းဆီး ခေါ် ဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး ရွာလူကြီး၏ ထပ်မံအာမခံပေးမှုကြောင့် ပြန်လည် လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်း စစ်တပ်မှပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက် ၂ ဦး သည် နေအိမ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်ထိ ၄င်းသည် အတော်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပျောက်ဆုံးနေရာမှ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပန်ဆိုင်းမြိုနယ်ရှိ ယခင် အစိုးရစစ်တပ်ဟောင်းနယ်မြေတွင် ဦးဂလောင်းဘောမ်ယော် (Galau Bawm Yaw) အား မြုပ်ထားသည်ကို ထိုနေရာတ၀ိုက် တောင်ယာ လုပ်ကိုင်နေသောသူများ မြေဆွနေစဉ်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ယိခူးဒေသခံမှဆက်ပြောသည်။
“တရုတ်အမျိုးသမီးက ၂၂ ရက်မှာ လူမြုပ်ထားသလိုတွေ့တယ်ဆိုပြီး အိမ်ကိုလာပြောတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ မိသားစုတွေက သွားကြည့်ပြီး အသင်း တော်က ဆရာတွေကို ပြန်လာပြောတယ်။ ဆရာတို့ကလည်း ကောင်းကောင်း ကြည့်အုံးပေါ့။ ဒါနဲ့ သူတို့က ၂၇ ရက် သောကြာနေ့မှာ မြေနည်း နည်း သွားတူးကြည့်တော့ လုံးဝသေချာတယ်ဆိုပြီး ပန်ဆိုင်းက အသင်းတော်ဆရာတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ရဲတွေ မီးသတ်တွေ ဆရာဝန် တွေနဲ့ ဇူလိုင်၂၈ ရက်နေ့မှာ သွားပြီး ဖော်ပြီး အဲဒီနေရာမှာ ပဲခွဲစိတ်တယ်။ တချို့က ရွာကို ပြန်ပြီး အခေါင်းတွေ သွားလုပ်ယူပြီးအဲဒီနားမှာပဲပြန်မြုပ် လိုက်တယ်။ ည ၇ နာရီလောက်မှပြီးတာ။ ကျမတို့လည်းအဲဒီချိန်မှ ဓါတ်မီးနဲ့ပြန်လာတာ” ဟုပြောသည်။
မိသားစုဝင်များသည် အပြစ်မဲ့ သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမှုဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်နေချိန် ပန်ဆိုင်းရဲစခန်းမှ ၎င်းနှင့် အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့သူများအား စစ် ဆေးမြေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်ကာ ဟုတ်မဟုတ် သက်သေအထောက်အထား ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သေဆုံးသူ၏ ဇနီးပြော သည်။
စစ်တပ်မှ လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပြီးနောက် ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းမှစ၍ မိသားစုဝင်များသည် နေရာအနှံ့ရှာဖွေခဲ့သော်လည်း မတွေ့သော ကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုအမျိုးမျိုးရှိခဲ့သည်ဟု ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဖောင်ရယ်ခေါန်ဖန် (Hpaure Hkawn Hpang) KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြော သည်။
“ကျမက ဘယ်လိုမှ မပြောတတ်တော့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတော့ အလောင်းလည်းတွေ့ပြီလေ နော်။ သူ့ရဲ့ အလောင်းလည်း ကောင်းကောင်း ပြန်မြုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ အခုတော့ သူ့ရဲ့ ဆုတောင်းပွဲကို ပျော်အောင် လုပ်လိုက်လို့ ရရင် တော့ ကျေနပ်ပါပြီ” ဟုပြောသည်။
ဦးဂလောင်းဘောမ်ယော် (Galau Bawm Yaw) ၏ အောက်မေ့ဖွယ်ဆုတောင်းပွဲကို သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွက် ပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိ ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မရှိကြောင်း ဝန်ကြီး ထပ်လောင်းပြောဆို
မျိုးမျိုး | အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် ၂၀၁၂
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းလူမျိုးစု ၁၃၀ ကျော်တွင် ရိုဟင်ဂျာ ဟူ၍ မပါဝင်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ က ထပ်လောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
ကိုလိုနီခေတ်အပြင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ကောက်ခံခဲ့သည့် သန်းခေါင်စာရင်းများကို ကိုးကား၍ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ရန်ကုန်မြို့ ပြည် လမ်း ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ရုံးဟောင်းတွင် ဇူလိုင်လ ၃ဝ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားသွားခြင်း ဖြစ် သည်။
“ကျနော်တို့မှာ တရားဝင် လူမျိုးစုကြီး ရှစ်စု ရှိပါတယ်။ ချင်း၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား၊ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး လူမျိုးစု ၁ဝဝ ကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာတွေက တရားဝင် လူမျိုးစုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာကော၊ ဗြိတိသျှ အစိုးရ ပြန်တမ်းမှာရော ၁၉၇၃ ခုနှစ်က ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း တွေမှာ ရော ဘယ်တုန်းကမှရိုဟင်ဂျာဆိုတာမရှိတဲ့အတွက် ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာသည် ကျနော်တို့ လူမျိုးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့လူမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကျနော် တို့ နိုင်ငံမှာ မရှိပါဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ထို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာစက်မှု ဖွံဖြိုးရေး ဝန်ကြီး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး၊ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒု-ဗိုလ် ချုပ်ကြီး ကိုကို၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် တို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အ ခွင့် အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနာ နှင့် သံတမန်များလည်း တက်ရောက်ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများမှာ နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက်ဖြင့် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှုများ ပါဝင်နေကြောင်းလည်း ဒု-ဗိုလ် ချုပ် ကြီး သိန်းဌေး က ပြစ်တင် ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဖြစ်စဉ်အချို့၏ အချိန်ကို ကြည့်ပါက တချိန်တည်း တပြိုင်တည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး အခြားပြင် ပမှလူ များ၏ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် အားထုတ်မှု ရှိသည်ကို သက်သေပြနေသည်ဟု ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ပြောသည်။
ပဋိပက္ခအတွင်း သေဆုံးခဲ့သည့် ၇၇ ဦးတွင် ရခိုင် ၃၁ ဦးနှင့် ဘင်္ဂါလီ ၄၆ ဦး ပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်း လူနေအိမ် ၄,၈၂၂ လုံး၊ ဗလီ ၁၇ လုံး၊ ဗုဒ္စ ဘာ သာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၁၄ ကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်း သုံးကျောင်း မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရ သည်။ လက်ရှိ ဒုက္ခသည်များထဲတွင် ရခိုင် ၈,ဝ၃၁ ဦးနှင့် ဘင်္ဂါလီ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ၅၃,၃၉ဝ ဦး ရှိသည်ပြီး ၎င်းတို့အတွက် အရေးပေါ်အကူအညီများ လိုအပ်လျက်ရှိသည် ဟု ဒု-ဗိုလ် ချုပ် ကြီး သိန်းဌေး က ပြောသည်။
ထို့ပြင် ပဋိပက္ခဖြစ်စေရန် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သော အထောက်အထားများ တွေ့ရှိရ၍ ကုလ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNH CR) မှ ငါးဦး၊ AZG မှ တဦး၊ ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့ (WFP)မှ တဦး တို့ကို တရားဥပဒေနှင့် အညီ စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်းလည်း ထုတ်ဖော် ပြော ကြားသွားသည်။
“ပဋိပက္ခတွေက ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေရဲ့လှုံဆော်မှုကြောင့် ဖြစ်ပြီးတော့ ရခိုင် လူ့အဖွဲ့စည်းနဲ့ ဘင်္ဂါလီ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ငြိမ်း ချမ်းစွာနဲ့ နေလိုကြပါတယ်” ဟု နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး က ပြောသည်။
မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော် ကျေးရွာမှ ရခိုင်အမျိုးသမီးတဦးကို အဓမ္မ ပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရ ပြီးနောက် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က တောင်ကုတ်မြို့တွင် မွတ်ဆလင် အမျိုးသား ၁ဝ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုတို့နှင့် ဆက်နွယ်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြည်နယ်တွင်းမှာတာ့ တည်ငြိမ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ခံစားမှုတွေ အတွက်တော့ အချိန်တခုထိတော့ ယူရ မှာပါ” ဟု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အပြီးတွင် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး က ပြောသည်။
ရွှေ့ပြောင်း အခြေချနေထိုင်သူများ၏ လူဦးရေ အလွန်အမင်း တိုးမြင့်လာမှု၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေး၊ မြေယာ အသုံးပြုမှုနှင့် လူ မျိုးရေး ပဋိပက္ခများအပြင် ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မှု အကန့်အသတ်၊ တင်းကျပ်သည့် ဝန်းကျင်နှင့်ဈေးကွက် အခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးမှု၊ ပညာရေး အဆင့်အတန်း နိမ့်ပါး၍ စာမတတ်မြောက်မှု၊ မဖွံ့ဖြိုးသည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ စသည်တို့သည် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ (ဘင်္ဂါလီများ)အတွက် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် စိန်ခေါ် မှုများ ဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးကပြောသည်။
ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သံတမန်များက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကယ်ဆယ်စခန်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု့ကြမည်ဟု ဦး ခင်ရီ က ပြောသည်။
ကုလ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနား က “အခု သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ က ကျနော့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက် တွေ ရရှိပြီးတော့ ဒီအချက်တွေကို ပြန်ပြီးတော့ သုံးသပ်နိုင်တယ်” ဟု သတင်း ထောက်များကိုပြောကြားသွားသည်။
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း ကောက်ပြီ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ တရားသူကြီး ချုပ်များ အပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အား လုံး၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပြုစု တင်ပြကြရန် အမိန့်တရပ် ညွှန်ကြား ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးဝင်းမြင့်က ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် သန့်ရှင်းသော အစိုးရနှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ နှင့်အကျိုး စီးပွားများကို ထုတ်ဖော်ကြေညာပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရန် အဆိုကို တင်ပြပြီးနောက် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်၏ အစိုး ရအဖွဲ့ဝင်များ အားလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ စာရင်းပြုစု တင်ပြကြရန် အမိန့်ထွက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ တင်ပြကြရမည့် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များတွင် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်နှင့်ပြည်ထောင်စု တရား လွှတ် တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ၊ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ၀န်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်များ၊ တရားသူကြီးချုပ်များ၊ တရားသူကြီးများ ပါဝင်သည်ဟု ယင်းအမိန့်စာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုတင်ပြရမည့် စာရင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း၊ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းစာ ရင်း တွင်မော်တော်ယာဉ်၊ စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်သံ ပတ္တမြားနှင့်ဝတ်ဆင်ရန် ရတနာများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊စုဆောင်း ထားရှိသော ငွေပ မာဏ၊ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းစာရင်းတွင် မြေ၊ အိမ်၊ အဆောက်အအုံများ တင်ပြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြွေးမြီနှင့် အခြားအထွေ ထွေပိုင်ဆိုင် မှုများ ရှိပါက လည်း တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းအမိန့် ထွက်ရှိလာပြီးနောက် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအကြား မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အဖြစ်သဘောသာ တင်ပြရန် လုပ် ဆောင်နေကြကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူများက ဆိုသည်။
“အမိန့်ထွက်လာတော့ ရုတ်ရုတ်သည်းသည်းပေါ့။ ဘာတွေ တင်ရမှာလဲ၊ ဘယ်လို တင်ရမှာလဲတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။အခုသိရသမျှတော့ ပိုင်ဆိုင် မှုတွေကို အဖြစ်လောက်ပဲ တင်ကြမယ်လို့ သိထားပါတယ်” ဟု အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နီး စပ်သူ တဦးက ပြောသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရက မကြာမီ ၀န်ကြီးအပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်လျက် ရှိရာ ရာထူးမှ အနားပေး ခံရ မည်ဟု သတင်းထွက်နေသော ၀န်ကြီးတချို့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကို အမှန်အတိုင်း တင်ပြရန် အခြေအနေမရှိဟု အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နီးစပ် သည့် သ တင်းရပ်ကွက်တွင် ပြောဆိုနေကြကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အရင်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Documentary Film၊ Short Film ဆိုတာကို ထိတွေ့မှု နည်းပါးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေ အ နေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ဝင်တစား ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် Freedom Film Festival (လွတ်လပ်ခြင်း ရုပ်ရှင်ပွဲတော်) ကို လာမယ့် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ကျင်းပတော့မှာပါ။
“ပြီးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့က လုပ်ပြီးသွားတဲ့ လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်က အတော့်ကို အောင်မြင်ခဲ့တယ် လို့ ပြောရမှာပေ့ါ လေ။ အဲဒီ အကျိုးဆက်က ဒီနေ့ မြန်မာပြည် လူငယ်တွေက Documentary နဲ့ Short film တွေရိုက်ဖို့ အရမ်း အားသန်လာပြီးတော့ အခု ဆိုရင် သင်တန်းပေါင်း မျိုးစုံလည်း ရှိလာတယ်။ ဒီလိုလူငယ်တွေ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လာတဲ့ အ တွက် ဒုတိယအကြိမ် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ထပ်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားလာ ကြ တာပါ” လို့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် စီစဉ်သူ လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
အခုတခေါက် ကျင်းပမယ့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နာမည်ကတော့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ “မ င်္ဂလာပါ ဒီမိုကရေစီ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျင်း ပမယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ဒီပွဲတော်မှာ အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၊ Animation၊ Photo Essay ဆိုပြီး အပိုင်း ၄ ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ် ပါ တယ်။ ဆုပေးပွဲကို ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ “လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာရုပ်ရှင် ပွဲတော်” မှာတော့ အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (Documentary Film) ဆုကို ဒါရိုက်တာ စိုင်းကျော်ခိုင်ရဲ့ “Click In Fear” ၊ အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းတို ရုပ်ရှင် (Short film) ဆုကို ဒါရိုက်တာမင်းသိုက်ရဲ့ “ကြိုး”၊ အကောင်းဆုံး Animation ဆုကို ဒါရိုက်တာ ဇော်ဘိုဘိုဟိန်းရဲ့ “Unity and Freedom”၊ အကောင်းဆုံး လူငယ် မျက်နှာသစ်ဆုကို အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ဒါရိုက်တာ အောင်ဇော်မိုးရဲ့ “Still in the dark” တို့က ရရှိသွားပြီး ပရိသတ် အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး ဆုကိုတော့ facebook ပရိသတ်တွေအကြား အလွန် ရေပန်း စားခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်းရဲ့ “အဲဒီအခန်းဖြတ်” ဇာတ်ကားက ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ် ပရိသတ်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး ဆုကတော့ “အဲဒီ ဂျာနယ်ပိတ်” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား များ ဖြစ်လေမလား မသိဘူးလို့ မစပ်စု တွေးမိပါတယ်။ မီ ဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာကို အားလုံး တောင့်တနေတဲ့ အချိန်မှာ မစပ်စုတို့ရဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနကတော့ ဟိုဂျာနယ်ပိတ်လိုက်၊ ဒီ ဂျာနယ် ယာယီရပ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတာကိုး။ ဒီနေ့ပဲ The Voice ဂျာနယ်နဲ့ Envoyကို အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြား လိုက်ရလို့ သတိရသွားတာပါ။ လွတ်လပ်ခြင်း ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လိုပဲ လွတ်လပ်ခြင်း မီဒီယာ ပွဲတော် ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ရရင် ကောင်းမှာလို့ မစပ်စု စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါက စကားစပ်မိလို့ ပြောကြည့်တာပါ။
ရုပ်ရှင်ပွဲတော် အကြောင်း ပြန်ဆက်ရရင် အဲဒီနေ့မှာပဲ The Art of Freedom Music Festival ပွဲတော်ကိုပါ ကျင်းပ သွားမယ်လို့ သိရပါ တယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ သီချင်းတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် ပွဲပေါ့။ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့ ဂုဏ်ရည်ကို ပေါ်လွင်အောင် စပ်ဆိုနိုင်တဲ့ တေးသီချင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်ကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ သီချင်း ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သီချင်းဆို တခါလာလည်း ရာဇ၀င် … အတ္ထုပတ္တိ လည်း ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ သီချင်း တပုဒ်ပဲ ကြားကြား နေရတာကို နည်းနည်း ညည်းငွေ့လာပြီ” လို့ သီချင်း ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို စီ စဉ်သူ ကို ဇာဂနာက ရှင်းပြပါတယ်။
ဒီသီချင်းပြိုင်ပွဲမှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်းအမျိုးအစားနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် အကောင်းဆုံ မြန်မာသံ သီချင်း၊ အကောင်း ဆုံး ခေတ်သစ်သီချင်း ဆိုပြီး အမျိုးအစားခွဲ ဆုချီးမြှင့်သွားမှာပါ။
“ဂီတအမျိုးအစား မခွဲထားပါဘူး။ Hip Hop သမားတွေလည်း ပြိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ Punkလည်း ပြိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ Rock လည်းပြိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဂီတ ဖြစ်နေဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်” လို့ ကိုဇာဂနာက ပြောပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် တေးသီချင်းတော့ ဖြစ်ရမယ်လို့ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ထားမှာပါ။
ဒီသီချင်းပြိုင်ပွဲက ဆုရ တေးသီချင်းတွေကိုတော့ ၂၀၁၃ မှာ စတင် ရိုက်ကူးတော့မယ့် ဗိုလ်ချုပ် ရုပ် ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာထည့်သွင်း အသုံး ပြု သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
သီချင်းပြိုင်ပွဲက ဆုရ တေးသီချင်းတွေကို “မင်္ဂလာပါ ဒီမိုကရေစီ” ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားမှာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက် သွားမှာဖြစ် ပါ တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတွက် သီချင်း ပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ ကျင်းပတာဟာ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အစိုးရတပ်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးကြောင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် စစ်ရေးလေ့ကျင့်
အစိုးရတပ် နယ်မြေရှင်းလင်းရေး မကြာခဏလုပ်သောကြောင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်နှစ်ခုလုံးနှင့် တိုက်ပွဲ များ ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း RCS S/SSA ကလည်း ယခုအပတ်အတွင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ဆက်တိုက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း နီးစပ်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါသည်။
“အမှတ် ၁ ကျိုင်းတုံ စစ်ဒေသ လွယ်ကော်ဝမ်းဌာနချုပ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အကြီး အကျယ်လုပ်တယ်။ လက်နက် ကြီး တွေလဲပစ်လို့ နယ်စပ်နေ ဒေသခံတွေ တော်တော်လှန့်သွားတယ်” - ဟု ဒေသခံ တဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြောပါသည်။
ဂျူလိုင် ၂၇-၂၉ ရက်နေ့အထိ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA အမှတ် ၁ စစ်ဒေသ ဌာန ချုပ်၌ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ စစ်သည်အင်အားရာချီသည့် အဆိုပါ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင် လက်နက်ကြီးငယ် မျိုးစုံ ပစ် ဖေါက် လေ့ ကျင့်ခဲ့ကြကြောင်း RCSS/SSA အသိုင်း အဝိုင်း ကပြောပါသည်။
“အထူးအဆန်းကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ပုံမှန်လုပ်နေကျ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပါဘဲ” - ဟု ကျိုင်းတုံစစ်ဒေသတပ်မှူးကြီးကွဏ်းဇင့်ကပြော ပါသည်။
“လွယ်ကော်ဝမ်းတခုတည်းမဟုတ်ဘူး၊ ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ RCSS/SSA ရဲ့ တပ်စခန်းကြီး ၅ ခုမှာ လုပ်တယ်။ အကြီးကျယ်ဆုံး စစ်ရေး လေ့ ကျင့်တဲ့ နေရာ ကတော့ လွယ်တိုင်းလျဲန်းဌာနချုပ်ပေါ့” - ဟု RCSS/SSA အရာ ရှိ တဦးကပြောပါသည်။
RCSS/SSA ၏ ယခုလ ၂၆-၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ၆ လ ပတ်အစည်းအဝေး၌လည်း အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးထားသော ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်း စဉ် အတိုင်းဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း အဆိုပါအရာရှိက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
သံလွင်အရှေ့ခြမ်း၌ အစိုးရ၏ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးစီမံချက်ကြောင့် RCSS/SSA ၏ အမှတ် ၁ ကျိုင်းတုံ စစ်ဒေသတခုတည်းပင် အစိုးရ တပ် နှင့် တိုက်ပွဲ ၇ ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ပြောပါသည်။
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့ဟုလူသိများသည့် RCSS/SSA နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ အပစ်ရပ်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ထား သည်ဟုဆိုသော်ငြားလည်း တိုက်ပွဲပေါင်း ၂၅ ကြိမ်ထက်မနည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်။
ကရင်နီပြည်နယ်တွင်း တပ်သိမ်းမြေယာပြန်ရဖို့ လူထုငါးရာကျော်မှ မာ ဖရိုရှေ့ကျေးရွာရှိ ကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ဝတ်ပြုဆု တောင်း ပွဲ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ယခုလိုအမှတ် ၁၄ စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတည်ဆောက်ဖို့ တပ်သိမ်း မြေယာတွေ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ကို ပြည်နယ်အစိုးရ ၊ လွှတ် တော်အမတ်နှင့် သမ္မတထံ တင်ပြတောင်းဆိုထားသော်လည်း ယခုချိန်ထိ တုန့်ပြန်မှုမရှိသေးဘူးလို့ လောဂျာမှ ကက်သလစ် သာသနာ ဆရာ ခူသဲ ရယ်က ပြောပါတယ်။
“ကျနောတို့ စာတင်တာလဲ မထူးခြားလာဘူး အထက်က သမ္မတတွေ ဝန် ကြီးတွေလဲ ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်သူလူထူတွေရဲ့ တောင်းဆိုမူ တွေကိုလဲ ဘာမှဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဘာဆက်လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးမူကို အစည်း ဝေးထိုင်ပြီးတော့မှ စုပေါင်းဆုတောင်း ပွဲ ကိုလုပ်မယ် စုပေါင်း ဆုတောင်းပွဲကို လုပ်တယ်ဆိုတာကလဲ ကျနော်တို့ ဘုရားကိုအား ကိုး တယ်”
ယမန်နေ့ တနေင်္ဂနွေနေ့ မနက်မှာ မာဖရိုရှေ့ကျေးရွာ အုပ်စုများရှိ ဒေသခံလူထုများတွေနဲ့ ဆုတောင်းပွဲအပြီးမှာ ပြောသွားတာဖြစ် ပါ တယ်။ ပတ်စဉ်ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်နေကြတာ ယခုကြိမ်ဆိုလျှင် ငါးကြိမ်မြောက်ရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ယာဧက ၁၆ ဧကပါသိမ်းခံရတဲ့ လောဂျာ ကျေးရွာမှ ခူဦးရယ်က ယခုလိုပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဒီမြေကွက်တွေက ဆန် စပါးတွေရလာတယ်ဆိုတာက ဒီမြေကွက်တွေနဲပဲလေး။ အခု လို သူတို့ လာလုပ်သွားတာက ကျနော် တို့ ဒေသခံလူထုတွေကို လာပြီးသတ်တာနဲ့ အတူတူပဲလေး ကျနော်တို့ ငတ်ပြတ်ပြီး သေသွား အောင် လာလုပ်နေတာနဲ့ တူတူပဲပေါ့”
ယမန်နေ့ မာဖရိုရှေ့ရွာမှ ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲအပြီးမှာ ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ် ၁၄ စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း လူထု အတွက်အကျိုးရှိစေမည့် အဆောက်အဦး တခုတခုအဖြစ် သော်လည်း ကောင်း ပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ မတ်လ ၇ ရက်နေ့ ပဏာမတွေ့ဆုံဆွေးနွေးချိန်မှာ တကြိမ် ၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာ တကြိမ် ဆွေး နွေးခဲ့ကြ ပေ မဲ့လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်မချ နိုင်ကြသေးပါဘူး။
သျှမ်းဧကရာဇ် စဝ်ဆေခန်ဖှ၏ အင်ပါယာနန်းတော် တရုတ်အ စိုးရက ပြန်လည် တည်ဆောက်
တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီဒေသရှိ သျှမ်းဧကရာဇ် စဝ်ဆေခန်ဖှ (၁၂၉၁-၁၃၆၄)၏ နန်းတော်ကို ဆရာတော် ဦးဝိသုဒ္ဓိဉာဏ ဦးဆောင်ဦးရွက်မှုဖြင့် ရွှေ လီဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ငွေရှင်တစ်ဦးတို့ ပူးပေါင်းပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
“ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ လည်ပတ်ဖို့နဲ့ သမိုင်းအစဉ်အဆက်က အမွေအနှစ်တွေကို ထိန်းသိမ်းဂုဏ် ယူဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ပြန် ဆောက်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရွှေလီဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါ သည်။
စဝ်ဆေခန်ဖှ၏ နောက်ဆုံးနန်းတော်တည်ရှိရာ ကောင်းဟော်ခမ်း(ရွှေနန်းတော်ကုန်း)၌ တည်ဆောက် မှာဖြစ်ပြီး မြေနေရာ အကျယ်အ ဝန်းမှာ ဧကပေါင်း ၁၁၅ ရှိကြောင်း၊ ကောင်းဟော်ခမ်းမှာ ရွှေလီမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ၂ မိုင်အကွာ ဝမ့်ပန်ပုံအနီး ရွှေလီမြစ်ကမ်းဘေး တွင် တည်ရှိ ကြောင်း၊ နန်းတော်မှာ အကျယ် ၉၅ ပေ၊ အရှည် ၂၁၀ ပေ၊ အမြင့် ၁၅၀ ပေရှိကြောင်း ဆို၏။
“ဝမ့်ပန်ပုံဒေသခံတွေရဲ့ မြေကွက်တွေပါ။ အစိုးရနဲ့ငွေရှင်းကို အပြီးရောင်းပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အ ကျိုး အမြတ်ရလာရင် ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ခွဲဝေပေး မယ်လို့ ကြားတယ်။ နန်းတော်ကိုတော့ သျှမ်းလက်ရာအတိုင်း လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ ဆောက် နေတဲ့သူတွေက သျှမ်းမဟုတ်တော့ရှေးရိုးရာသျှမ်း လက်ရာနဲ့တော့ နည်း နည်းကွာခြားရင် ကွာခြားမယ်” ဟု ၎င်းက ဆက် ပြော ပါသည်။
နန်းတော်၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဉာဏ်တော်အမြင့် ၂၂၇ ပေရှိ စေတီတဆူ တည်ထားကိုးကွယ်မှာဖြစ်ပြီး မြောက်ဘက်တွင် သျှမ်းရိုးရာ အ စား အစာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်၊ အနောက်ဘက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ စာသင်တိုက်တို့ကို တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၀ မှစ၍ မြေ ထွန်မြေ ညှိကာ နန်းတော်ကို ၂၀၁၁ ဂျွန်လ ၆ ရက်နေ့မှစတင် တည်ဆောက်လာပြီး ၂၀၁၄ ၌ ပြီးစီးရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း၊ ဦးဝိသု ဒ္ဓိဉာ ဏ ခေါ် စဝ်တင်းတိုင်း၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆောက်အဦး အားလုံးအ တွက် စုစုပေါင်း တရုတ်ယွမ်ငွေ သန်းပေါင်း ၂၀၀ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သျှမ်းဧကရာဇ် စဝ်ဆေခန်ဖှသည် အသက် ၂၀ နှစ်ပြည့်သည့် ၁၃၁၁ တွင် မောပြည်ထောင် စတင်တည် ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၃၆၄ ခုနှစ်အ ထိ တရုတ်နိုင်ငံ တာ့လိ(ခွန်းမင်)အထိ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်၊ ထားဝယ် အထိ၊ အန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံ ၊ အာဟုမ်ပြည်အထိ၊ လောနိုင်ငံ အ နောက်ပိုင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း အထိ အာဏာပျံ့ပွါးခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည် ဘုရင်မင်းဆက်များပင် စဝ်ဆေခန်ဖှအား ပြိုင်ဖက်ကင်း မဲ့သူဟုချီးမြင့်ဂုဏ် ပြုခဲ့ကြသကဲ့သို့ သျှမ်းလူမျိုးများအား မျက်နှာပန်းလှအောင် လုပ်ပေးသည့် သူရဲကောင်း တဦးဖြစ်သည်။
မြန်မာ အနောက်ဘက် နယ်စပ်ကို ကွက်ကဲရန် နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး အသစ် ရောက်ပြီ
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်နယ်စပ်ကို ကွပ်ကဲရန် အတွက် နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး အသစ် တစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိ သည်။
“မနေ့က ၂ နာရီခွဲမှာ ရောက်ပါတယ်။ သူနဲ့အတူ သစ်တောရေးရာ ပြည်နယ် မန်နေဂျာလည်း ပါ တယ်။ အခု အသစ် ရောက်လာတဲ့ နစက ကွပ်ကဲရေးမှူးက ရခိုင် လူမျိုးလို့ပြောပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးလို့ပြောတဲ့ အတွက် ဒေသခံ ရခိုင် တွေကတော့ ၀မ်းသာကြပါတယ်” ဟု မောင် တောမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ယခင်ရှိခဲ့သော နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီးအား တာဝန် ပေါ့လျော့မူနှင့် လာဒ်ပေး လာဒ်ယူမူများကြောင့် နေပြည်တော် သို့ ခေါ်ယူသွားပြီးနောက် အဆိုပါ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်မောင်ဦး ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ရက်အတန်ငယ် လစ်လပ်နေခဲ့သည့် မောင်တောမြို့ အခြေစိုက်သည့် နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနှင့် ကွပ်ကဲ ရေးမှူး နေရာတွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင် ရန် ရောက်ရှိလာသည့် ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်ဦးမှာ ယခင် နစက မှူးများ ပြောင်းရွှေ့လာပုံနှင့် မတူဘဲ ထူးခြားချက်များ ရှိနေ သည်ဟု သိရသည်။
“အရင်က ဗမာပြည်မဘက်က အရာရှိတွေ မောင်တောကို ပြောင်းလာရင် ဘာပစ္စည်းမှ ပါမလာဘူး။ ဒီက ပြောင်းမှဘဲ ပစ္စည်းတွေ အပြည့် နဲ့ပြန်တာ။ အခုရောက်လာတဲ့ ကွပ်ကဲရေးမှူးမှာတော့ အိမ်သုံး ပရိဘော ဂတွေ အစုံ ပါလာတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒါ တခုကတော့ ထူးခြားတယ်။” ဟု မောင်တောမြို့မှ နစကနှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ပြောသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီး အပါအ၀င် နစက အရာရှိများသည် လာဒ်ပေး လာဒ်ယူမူ လုပ်ရာတွင် ပါဝင် ပတ်သက်မူများ အကြီးအကျယ် ရှိ နေ ကြောင်း သတင်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်နေပြီး ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆူပူမူကိုလည်း ယခင် နစကကွပ် ကဲရေး မှူးက သိန်းပေါင်း ၃၅၀၀ ယူကာ ခွင့်ပြုခဲ့သည် ဆိုသော စွပ်စွဲချက်များလည်း အများအပြား ပေါ်ပေါက်နေသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ကို ယခုအခါ နိုင်ငံတော်မှ သိမ်းဆည်းလိုက်ကြောင်း မောင်တောမြို့ တွင် သတင်းများ ထွက်များ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း နိရဉ္စရာမှ သီးခြား အတည် မပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
ယခင် ကွပ်ကဲရေးမှူး အောင်ကြီးကို ဇွန်လအတွင်းက မောင်တောမြို့တွင် ဘင်္ဂလီများ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ် ပွားနောက် နယ်ပြည်တော်သို့ ခေါ်ယူသွားပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းမှူး ကိုကိုနိုင် ကိုယ်တိုင် မောင်တောခရိုင်ရှိ နစက တပ်ဖွဲ့များကို ယာယီကွပ်ကဲခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်း တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်မည့် စီမံချက် ၆ ခုအတွက် စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၂. ၅ သန်းတန် (အ မေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ သန်းခန့်) ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ တရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ ကြက် ခြေနီ အ သင်းဥက္ကဋ္ဌတို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။
လခြမ်းနီအသင်းများ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း (MRCS) ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သာလှရွှေ နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Tee Tua Ba တို့က အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းများ ဖက်ဒ ရေးရှင်း (IFRC) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Konoe Tadateru၊ အရှေ့တောင်အာရှ ၁၀ နိုင်ငံမှ ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီ အသင်းများ၏ ခေါင်းဆောင် များ ရှေ့မှောက်တွင် အပြန်အလှန် လက်မှတ်ရေးထိုး လဲလှယ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်း နားလည်မှု စာချွန်လွှာအရ ဒေါ်လာ ၂ သန်းကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၅ ခုရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီ အ သင်း ရုံးများတွင် သတင်း အချက်အလက်များ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် တုန့်ပြန်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေရာတွင် ပိုမိုထိရောက် ကောင်းမွန်လာစေရေး၊ ရန်ကုန် – နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမ တလျှောက်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူများအ တွက် သူနာတင်ယာဉ် ၀န်ဆောင်မှု ပြုလုပ်ရေး၊ ရပ်ရွာ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ကြက်ခြေနီ စေတနာ့ လုပ်အားရှင်များ အတွက် ရှေးဦးသူနာ ပြုစု ခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံကိန်းသင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးတို့ အတွက်အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ယင်းစာချွန်လွှာ၌ ကချင် ပြည်နယ်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် လက်ရှိ နေထိုင်ကြသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၅ ထောင် ကျော် အတွက် ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများ၊ အိမ်ထောင်စု ၃၀၀၀ အတွက် တာပေါ်လင်စများ ထောက်ပံ့ရေး၊ ရန်ကုန် – နေပြည် တော် အမြန် လမ်းတွင် ရှေးဦးသူနာပြု စခန်းတခု ထားရှိရန်နှင့် မြို့နယ် ၄ မြို့နယ်တွင် သိုလှောင်ရုံ လေးခုနှင့် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း များ အရန်သင့်ထား ရှိရေး၊ ပြည့်စုံသည့် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများပါဝင်သည့် ကျောင်း ၃ ကျောင်း တည်ဆောက် ဖွင့်လှစ် ပေးနိုင်ရေး၊ မြန်မာ နိုင်ငံအ တွင်း သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ အရေးပေါ် အသုံးပြုရန် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရေးနှင့် အလျင်အမြန် တုန့်ပြန်ရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် ရန်ပုံငွေ ထားရှိရေး စသည့် လုပ်ငန်းစဉ် များလည်း ပါဝင်သည်။
“စင်ကာပူ ကြက်ခြေနီ အသင်းအနေနဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ရွေးချယ်ရာမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု အခြေအနေ တွေသာမက နှစ်နိုင်ငံအကြားက ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုပါ ဂရုတစိုက် ကြည့်ရှု လေ့လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ လမ်းကျဉ်းလေးပေါ်မှာ အတူတကွ လျှောက်သွားရင်းနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အောင်မြင်အောင် အတူတကွ ဆောင်ရွက် သွားကြ ပါမယ်” ဟု Mr. Tee Tua Ba က ပြောသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် မြန်မာပြည်သူများအတွက် ရည်ရွယ် ကာ စင် ကာပူနိုင်ငံ ပြည်သူများက လှူဒါန်းသည့် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၂ သန်း (ကန်ဒေါ်လာ ၉ သန်းကျော်) အနက် ၇.၃ သန်း (ကန် ဒေါ်လာ ၅. ၆ သန်း) ကို အိမ်ရာများ ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းနှင့် ကျောင်းများ၊ မိဘမဲ့ဂေဟာများ ထူထောင် ဆောက်လုပ်ပေး ခြင်းများ ရှိကြောင်း၊ တချို့စီမံကိန်းများမှာ လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ အရေးပေါ် အခြေအနေများအတွက် သောက် သုံးရေ လိုအပ်ချက်၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ အ၀တ်အစားနှင့် လေဘေးဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ပေးရေး၊ စီးပွားရေး လုပ် ငန်းများအတွက်လှေ များ ပြန်လည် ၀ယ်ယူပေးရေး စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အသုံးပြုလျှက် ရှိကြောင်းနှင့် ပြန်လည် ထူထောင် ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂. ၂ သန်း (ကန် ဒေါ်လာ ၁ . ၇ သန်း) လှူဒါန်းရန် ဆက်လက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သိရကြောင်း MRCS မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဆို သည်။
“လူထုအခြေပြု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖို့ ကိုယ်စားလှယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုံးစိုက်ဖို့ စေလွှတ်ပြီး MRC နဲ့ အနီးကပ် ပူးပေါင်း ကူညီနေတာက ပြင် သစ်၊ ဒိန်းမတ်နဲ့ သြစတေးလျ ကြက်ခြေနီအသင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အခုတော့စပြီး ICRC (အပြည် ပြည် ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီအသင်း) နဲ့ အနီး ကပ် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် နေပါပြီ” ဟု MRCS ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ သာလှရွှေက ပြော သည်။
ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နှင့် ၁၂ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းများ အစည်းအဝေး တွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ၀င်ခွင့်ပြုမည် ဆိုပါကICRCအနေဖြင့် အကျဉ်းသား အားလုံးကို ကြည့်ရှုရန် သ ဘောတူမည် ဆိုသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် တခုရခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
“နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ မူအရ ပွင့်လင်း လာတာနဲ့အမျှ ICRC ဘက်က ပိုမိုပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ချင်တာ တွေ များလာတယ်။နိုင်ငံတကာ ပူး ပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကလည်း အရင်ကထက် ပိုများလာတယ်။ အရင်က တခါမှ မကမ်းလှမ်းဘူးတဲ့ အ မေရိကန် ကြက်ခြေနီ၊ ဗြိတသျှ ကြက်ခြေနီ အသင်းတွေကပါ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ချင်တယ် ဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာသာလှရွှေက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာအကြား ပါ့စ်ပို့စီးပွားရေးသမားများ အခက်အခဲကြုံနေရဆဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခကြောင့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် အ ကြားတွင်ပါ့စ်ပို့ဖြင့် တရားဝင် ကူးသန်းဖြတ်ကျော် နေကြ သည့် စီးပွားရေးသ မားများမှာ ယခုအချိန်ထိ စတင်သွားလာရန် အခက်အခဲဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံ နေ ကြရကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဇွန် ၈ ရက်နေ့မှ ယခုအချိန် ထိ စုစုပေါင်းရက် ၅၀ ကျော်အတွင်း နေ့စဉ်နှင့် တစ်ပတ် ကြာ ပါ့ပို့စ်ဖြင့် ကူး ဖြတ်သွားလာနေကြသည့် ကုန်သည်များမှာ ယမန်နေ့ကအထိ ၂ ရက်ခန့်သာ အနည်းငယ်မျှ အစမ်းသဘော သွားခဲ့ ကြ ကြောင်း နယ်စပ် စီးပွားရေး သမား များက ပြောသည်။
သွားနေကြတာ မတွေ့ရဘူး၊ လုံးဝကို မမြင်ရပါဘူး၊ အယင်ဆိုရင် နေ့စဉ်ပါ့စ်ပို့သမားတွေ ရှင်ပြုပွဲတွေမှာ သွားနေကြသလို အထပ်အပိုး တွေနဲ့ တန်းစီသွားနေကြတာ တနေ့တနေ့ကို ဦးရေ ၁၀၀ ကျော်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီပါ့စ်ပို့ သမားတွေ ပြောတာက ဒီကြားထဲသွားရင် အကုန်လုံး အရင်းပြုတ်သွားနိုင်တယ်၊ အသက်အန္တရာယ်ကရှိသေးတယ်၊ ပြီးတော့ နစက ကိုပေးရ၊ BGBကိုပေးရတာနဲ့ သိပ်မကိုက်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်၊ မိုးတွေကလည်း မနားတမ်းရွာနေတော့ စောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။” ဟု မောင်တောမြို့မှ ကုန်သည်ကြီး တစ်ဦးက ရှင်းပြခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်စီးပွားရေးတွင် နေ့စဉ်နှင့် တပတ်ကြာပါ့စ်ပို့ယူကြပြီး ကူးဖြတ်သွားလာနေကြသူများ အနေဖြင့် ပဋိပ က္ခစတင်ဖြစ်ပွားသည့်ကာလမှ ယခုအချိန်ထိ စားဝတ်နေထိုင်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး အခက်အခဲများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရကြောင်း သိရှိ ရသည်။
“ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ကုန်တွေသယ်ပို့မှ စားဝတ်နေရေးအတွက် နည်းနည်းပါးပါး ထွက်တာပါ၊ ပြဿနာဖြစ်တော့ ဘာဝင်ငွေမှမရှိတဲ့ အ ပြင်ဘယ်ကိုဘယ်လို ထွက်ပြေးရမလဲ အသက်ရှင်ရေးအတွက် ဒါကိုပဲ စဉ်းစားနေခဲ့ရပြန်တယ်၊ လုပ်နေကျအလုပ်ကို မလုပ်ရတော့ သားသ မီးတွေ ကျောင်းစရိတ်တွေလည်း မဖုံလုံဘူး၊ ခုချိန်ထိ ကျောင်းတက်ခွင့် မသာသေးဘူး၊ နေ့စဉ်စားဖို့က ဖြစ်သလိုတော့ ရှာစား နေကြတာ ပဲလေ၊ နယ်စပ်မှာကောင်းလာရင်လည်း ရင်းဖို့ငွေလိုနေသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အရင်ကလို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အလုပ်လုပ်ဖို့ မရဲတရဲ ဖြစ်နေပါ တယ်။” ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ မောင်တောမြို့နယ်မှ ကုန်သည်အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယင်းပဋိပက္ခမဖြစ်ခင်ကတည်းက နှစ်နိုင်ငံအကြား ပါ့စ်ပို့ဖြင့် တရားဝင် ၀င်ထွက်ခဲ့ကြသူများတချို့မှာ မိမိနေရင်း ရပ်သို့ အခြေအနေများကိုလေ့လာကြည့်ရှုပြီး တရားမ၀င် ပြန်သွားခဲ့ကြသူများ ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနေဖြင့် အိမ်နီးချင်း မြန်မာနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ချုပ်ဆိုထားသည့် စီးပွားရေးနှင့် နယ်စပ်လုံခြုံရေးများအတွက် ပူး ပေါင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စာချုပ်များကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် အထူးလိုလားမှုများရှိနေသောကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည့် ပဋိ ပက္ခကြောင့် မိမိနိုင်ငံအတွင်းသို့ ကူးစက်လာမည့် အခြေအနေ ဆိုးကျိုးများကို ကြိုးပမ်းထိမ်းသိမ်းခဲ့မှုများ ရှိသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကာလအတွင်း မြန်မာမှ ဘင်္ဂလာသို့ ကျူးကျော်လာသူများဟု စွပ်စွဲပြီး ဘင်္ဂလီအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေး စု ပေါင်း ၂၀၀၀ နီးပါးခန့်အား ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ တရားမ၀င် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ကော့စ်ဘဇားမြို့ထုတ် သတင်းစာများက ဖေါ်ပြချက်အရ သိရှိ ရသည်။
မြန်မာမှ ဘင်္ဂလာသို့ ဇွန်နှင့် ဇူလိုင်လအတွင်း ငါးတန်ချိန် ၅၀၀ ခန့်နှင့် ဇူလိုင်အတွင်း ဘုတ် (၁၂)စီးကျော် သစ်တန်ချိန်ပေါင်း ၈၀၀ ခန့်တို့ကို တ ရားဝင်တင်ပို့ ခဲ့ကြောင်းနှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် လှေများဖြင့် ပုဇွန်များ တရားမ၀င် တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း တာခ်နာမြို့နယ်မှ စီးပွားရေး သမား တစ်ဦးက ပြောသည်။
သမ္မတနှင့် တိုင်းရင်းသား ပါတီများတွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ် ရွှေ့ဆိုင်း
တိုင်းရင်းသား ပါတီများအား သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မှ တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ်အား ရက်ရွှေ့ဆိုင်းထားကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေပါတီ ၁၀ ပါတီနှင့် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံပြီးနောက် ကျန် တိုင်းရင်းသား ၁၄ ပါတီနှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားမှုအား ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ KPP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင်မြင့် က ပြောသည်။
“အဲဒီကိစ္စရွှေ့ဆိုင်းထားတယ်။ ဘာကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းထားလလည်း ကျနော်လည်း မသိဘူး။ အဲလိုပဲ ဖုန်းဝင်လာတယ်။ ရွှေ့ဆိုင်းထား တယ်လို့” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နိုင်ငံအဝှမ်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအမံနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဆွေနွေးရန်ဖြစ်ကြောင်း “သိပ်မကြာ ခင် ပေါ့။ နေ့ မသိသေး ဘူး။ ကျနော်သိသ လောက် ၁၄ ပါတီပဲ။ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေ ၁ဝ ပါတီထဲမှာမပါတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေပဲပေါ့ဗျာ” ဟု KPP ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည်။
ထိုတွေ့ဆုံပွဲကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်ကို မသိရှိရသော်လည်း ၁၀ ရက်အတွင်း သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်လိမ့် မည် ဖြစ် ကြောင်း အခြား တိုင်းရင်းသားပါတီတခုမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီများအား အစိုးရမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့် အစီအစဉ်များ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေး တည် ဆောက် မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
မြ၀တီတွင် MOU ပုံစံဖြင့် ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ပြုလုပ်နေသော အလုပ်သမား (၇၀၀) ပွဲစားထံတွင် ငွေလိမ်ခံရ
ထိုင်း- မြန်မာ နယ်စပ် မြ၀တီမြို့ရှိ အလုပ်သမား ပါ့စပို့စ်ရုံးတွင် နားလည်မှုစာချွန်ဟုခေါ်သော Memorandum Of Understanding (MOU) ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (၇၀၀) ခန့်မှာ ပွဲစားထံတွင် ငွေများအလိမ်ခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“ကျနော်တို့က ထိုင်းနိုင်ငံကို MOU နှင့် အလုပ်သွားလုပ်ဖို့အတွက် ပွဲစား ဘိုလှဝင်း(ခ) ကိုမောင် မြင့်နိုင်ကို ပိုက်ဆံပေးထားတယ်၊ ကျနော်သိတဲ့လူတွေကတော့ (၂၀) လောက်ရှိတယ်၊ သူတို့တွေက တစ်ယောက်ကို မြန်မာကျပ်ငွေ နှစ် သိန်းလောက်ပေးထားပြီ၊ ကျနော်တို့နှင့် တဖြတ် တည်း MOU နဲ့ ပါ့စပို့လုပ်တဲ့သူ (၇၀၀) လောက်ရှိတာ၊ ဒီလူတွေဆီကလည်း ယူပြီး ထွက်ပြေ သွားတယ်” ဟု ငွေအလိမ်ခံရသူတဦးဖြစ်သူ ကိုမောင်အေးရွှေက အာရကန်တိုင်း မ်စ်အား ပြောကြား သွားသည်။
သူကဆက်လက်ပြီး အလိမ်ခံရသူများ၏ ငွေပမာဏနှင့် လူအရေအတွက်ကို ယှဉ်တွဲပြီး မှတ်မိ သလောက် ပြောပြသည်။ “ ကိုမောင်အေးရွှေ- ၁၇၀,၀၀၀(ဘတ်)၊ ကိုမောင်နုနှင့်ဇနီး- ၁၇,၀၀၀(ဘတ်)၊ ကျော်နိုင်သန်းနှင့်ဇနီး- ၁၇,၀၀၀(ဘတ်)၊ ကိုခင်မောင်ဦး- ၇၀,၀၀၀(ဘတ်)၊ မောင်ဆန်း ဝင်း၊ ထွန်းဝင်းနှင့် ထွန်းထွန်းနိုင်တို့မှ စုစုပေါင်း ၄၅,၀၀၀(ဘတ်)၊ ကိုသိန်းထိုက်- ၁၄၀,၀၀၀(ဘတ်)၊ ခင်ကျော်ဝင်း- ၂၀၀,၀၀၀(ကျပ်)၊ ဆန်းဆန်းဝင်း- ၁၅,၀၀၀(ဘတ်)၊ ကျော်နိုင်ဝင်း- ၁၅,၀၀၀(ဘတ်)၊ ထွန်းထွန်း- ၁၅,၀၀၀(ဘတ်)၊ သာထွန်းလှ- ၇,၀၀၀(ဘတ်)၊ ဦးသန်းကြည်၊ သန္တာဦး၊ ဦးစောနိုင်တို့မှ စုစုပေါင်း ၆၀၀,၀၀၀(ကျပ်)၊ ကျော်နိုင်သန်းနှင့်ဇနီး- ၁၄,၀၀၀(ဘတ်)၊ မောင်နုနှင့်ဇနီး- ၁၄,၀၀၀(ဘတ်)၊ ကျော်မြင့်နိုင်- ၂၀၀,၀၀၀(ကျပ်) ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကျနော်မသိတာ အလိမ်ခံသူတွေ အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။ ” ဟု ဆိုသည်။
ပွဲစား ဘိုလှဝင်း(ခ)မောင်မြင့်နိုင်မှာ မြန်မာအလုပ်သမား(၇၀၀) ထံမှ ငွေများလိမ်ယူသွားသည့်အပြင် ၎င်းတို့ကိုင်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံ သား မှတ်ပုံတင်များကိုပါယူသွားသဖြင့် အဆိုပါ အလုပ်သမားများမှာ နေရပ်သို့ပြန်ရန် ခက်ခဲနေခြင်းကြောင့် မြ၀တီမြို့ရှိ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် များမှ နေရပ်သို့ပြန်ရန်အတွက် အလုပ်သမားတစ်ချို့အား ထောက်ခံစာများ ထုတ်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
အလုပ်သမားများမှာ မိမိတို့အလိမ်ခံရသည့်ငွေများ ပြန်လည်ရနိုင်ရေးအတွက် မြ၀တီအခြေစိုက် KNU ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတွင် တိုင် ကြား ထား သည့်အတွက် အဆိုပါပွဲစား ဘိုလှဝင်း (ခ) မောင်မြင့်နိုင်အား KNU ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှ ၊ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီး ထားပြီး ပွဲစားမောင်မြင့်နိုင်မှာ ၄င်းနေ့တွင်ပင် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အလုပ်သမား (၇၀၀) ထံမှ ငွေလိမ်ယူကာ ထွက်ပြေသွားသူ ပွဲစား ဘိုလှဝင်း(ခ)မောင်မြင့်နိုင်မှာ ရခိုင်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ မညှင်းချောင်း ကျေးရွာမှ ဦးစောရွှေ၊ ဒေါ်ယဉ်နုတို့၏သားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ် ၁၁/မဥန (နိုင်) ၀၇၀၁၀၀ ကိုကိုင် ဆောင်ထား သူဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာအလုပ်သမား (၇၀၀) ခန့်မှ ငွေများလိမ်လည်သွားသော ပွဲစား ဘိုလှဝင်း(ခ)မောင်မြင့်နိုင်အား မြန်မာနိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာ ပိုင် များအနေဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်ပြီ်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အလုပ်သမားအရေးကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေ ကြသော အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်း နောက်ထပ်အခုလိုမျိုး မဖြစ်ရအောင် ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက် ဖြေရှင်းပေးကြဖို့အတွက် ထိုင်း နိုင်ငံရှိ မြန်မာရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားထုကိုယ်စား ကိုမောင်အေးရွှေက အကြံပြု တိုက်တွန်း သွားသည်။
ထိုင်းနုိုင်ငံကို မြန်မာနုိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် ရောက်ရှိလာကြသူများမှာ တချို့သော မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံသား ပွဲစားများ နှင့် ထိုင်းအလုပ်ရှင်များ၏ လိမ်လည်မှုများကို မကြာခဏခံနေရခြင်းကြောင့် အဆိုပါ အလုပ်သမားများမှာ အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးနှင့် လုံခြုံရေး အခက်အခဲများ ရှိနေကြကြောင်းလည်း အလိမ်ခံရသည့် အလုပ်သမားများ၏ ပြောပြချက်များရ သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ပါကစ္စတန် နိုင်ငံအခြေစိုက် တာလီဘန် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ Tehreek-e – Taliban (TTP) က ခြိမ်းခြောက်မှု အပေါ် နိုင်ငံ အ တွင်း နေထိုင်သူ အစ္စလမ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင်များက ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“အဲဒီ တာလီဘန်ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက် အုပ်စုတွေကို ကျနော်တို့ လက်မခံဘူး။ သူတို့ကြောင့် သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် ဒီမှာ ဖြစ်မယ့် ကိစ္စ တွေကိုလည်း အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ ဒီမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေ ကလည်း သူတို့နဲ့ ဘာမှ မပတ်သက် ဘူး” ဟု မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အစ္စလမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီး၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စိုးက ပြောသည်။
ပြည်တွင်းရှိ မွတ်စလင် အဖွဲ့များအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချသကဲ့သို့ ထိုသို့ အကြမ်းဖက်လိုသော အဖွဲ့အစည်း များနှင့်လည်း ပတ် သက် မှု မရှိကြောင်း၊ အလားတူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ စိစစ်မှု မရှိသော အချက်အလက် များ နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေခြင်းကိုလည်း မလိုလားကြောင်း ဦးကျော်စိုးက ပြောသည်။
“ဆန္ဒပြတယ်၊ ဆိုင်းဘုတ်ထောင် တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာက သူတို့ တောင်းဆိုချက်တွေ မှန်ချင်မှန် မယ်၊ မှားချင်မှားမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေ ကို ကျနော်တို့ မလိုလားဘူး၊ ပြည်တွင်းကိစ္စကို ပြည်တွင်းမှာပဲ ကျနော်တို့ ရှင်းမှာပါ။ လော လော ဆယ် တာဝန် အရှိဆုံးက အစိုးရပါ၊ အစိုးရ လည်း လုပ်နေပါတယ်” ဟု သူကဆက်ပြောသည်။
အစ္စလမ် ဘာသာဝင် များနှင့် စုဖွဲ့ထားသော အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (NDPD) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း ကလည်း “သူတို့ဘာသာ သူတို့ ခြိမ်းခြောက်တာ ကျနော်တို့ကို ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး၊ ကျနော်တို့က စိတ်မဝင် စားဘူး” ဟု ပြောသည်။
ပြည်သူအများ ဒုက္ခသောက ရောက်စေမည့် မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးကိုမှ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လက်ခံနိုင် မည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာ မွတ် စလင် အိုလမာ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ ကတော့ ကိုယ့်ပြည်သူတွေ သောကရောက်မှာကို မလိုလားဘူး” ဟု မြန်မာ မွတ်စ လင် အိုလမာ အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူ တဦး ဖြစ်သည့် ဦးရဲနောင်သိန်း က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့တွင် အကြမ်းဖက်သူများ၏ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသော မွတ်စလင် ၁၀ ဦး၏ ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည် ထောင် စုအဆင့် ပြည်ထဲရေး ဒု ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇံမြင့် အပါအဝင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့များ စုပေါင်း၍ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့က စုံစမ်းစစ် ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ခဲ့ခြင်းအပေါ် အစ္စလမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့များက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းပြီး ဒုတိယမြောက်နေ့တွင် မောင်တောမြို့၌ အစွန်းရောက် မွတ်စလင်များ၏ သွေးဆူ အကြမ်းဖက်ခဲ့မှု ကြောင့် မ လိုလားအပ်သော ပြဿနာများ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုပဋိပက္ခ များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အစိုးရက အဓိက ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ဦးရဲနောင်သိမ်းက ဆက်ပြောသည်။
“တဘက်မှာ အစိုးရက ဖော်ထုတ်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်က အစွန်းမရောက်တာ ကောင်း တာပေါ့။ အစွန်းမရောက်ဘဲ သွားပြီး မလုပ်ခဲ့ ရင် အဲဒီအဖြေက တော်တော် လှလှပပ ထွက်လာမှာပါ။ အခုတော့ သူတို့က အစွန်းရောက် ပြီး ကလဲ့စားချေတဲ့ ပုံစံသွားလုပ်တော့အသတ် ခံရတဲ့ ကိစ္စ ဇွန်လပိုင်းကုန်မှာ ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ အဖြေက အခုထိ မသိရှိရဘူး ဖြစ်သွား တယ်” ဟု ဦးရဲနောင်သိမ်းက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများကြောင့် ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၆ သောင်းကျော် ရှိနေရာ အရေးပေါ် အကူအညီနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အ ကူ အညီများ လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ် ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ယနေ့ နေ့လယ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ရန်ကုန် ပြည်လမ်းရှိ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရုံးအဆောက်အအုံတွင် ကျင်းပပြီး ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့် အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တာနာ၊ ရန်ကုန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ သံရုံးများ၊ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် အပြည် ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပဋိပက္ခများသည် ဘာသာရေး အစွန်းရောက်များ၏ လှုံ့ဆော်မှု များကြောင့် ဖြစ် ပြီး ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံးသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေလိုကြကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ် အပြီးတွင် ထားဝယ်ရေနက် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှု စာ ချွန် လွှာများ ရေးထိုးနိုင်သည့် အောင်မြင်မှုသာမက ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ခွင့်နှင့် အလုပ်သ မားအခွင့် အရေး အပြည့်အဝ ရရှိစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
သမ္မတနှင့် အတူ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် လိုက်ပါလာခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ များနှင့် တွေ့ဆုံ ကာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အရေး ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် မည်မျှ ထိရောက်စွာ ပြောဆို ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်ကို မသိရသေးပေ။
ယခင် နအဖ အစိုးရလက်ထက်က စီးပွားရေး မပြေလည်မှုကြောင့် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်၍ အလုပ်အကိုင် အ ခွင့် အလမ်း ရှာဖွေကြသော မြန်မာ အလုပ်သမားများအပေါ် ထိုင်းအလုပ်ရှင်များက နှိမ်ချဆက်ဆံရုံမျှ မက အခြေခံ လုပ်ခ လစာကို လည်း ထိုင်း နိုင်ငံသား အလုပ်သမားများထက် များစွာ လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာ အလုပ်သမားများ အရေး ကိစ္စ တခု ကြုံရလျှင် ထိုင်း နိုင်ငံ အခြေစိုက် မြန်မာသံရုံးအပါအဝင် မြန်မာအစိုးရက လျစ်လျှူရှုထားခဲ့သည့် အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာများမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ မျက်နှာငယ်ခဲ့ရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမဝင် နေထိုင်သော မြန်မာအလုပ်သမား များသည် ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ အချိန်မရွေး စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုခံရနိုင် သော ကြောင့် လူအများရှေ့တွင် မြန်မာစကားကိုပင် မပြောမဆိုရဲသည် အထိ အကြောက်တရားနှင့် သူတပါးနိုင်ငံတွင် ပင်ပန်းစွာ အလုပ် လုပ်ကိုင် ခဲ့ရသည်၊ ထိုင်းအလုပ်ရှင်များ ဘက်က ဖိနှိပ်မှု၊ လစာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ မမျှတမှုများ ရှိသည်ကို သိသော်လည်း စားဝတ်နေရေးကို ငဲ့၍ ခါးချိုး အလုပ်လုပ်ခဲ့ ကြရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ခန့်က စတင်၍ ထိုင်း – မြန်မာ အစိုးရ ပူးပေါင်းကာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ်များ ထုတ်ပေး ၍ တရားဝင်ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ သော်လည်း ခြစားသည့် နှစ်နိုင်ငံ အာဏာပိုင်တချို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ အလုပ် သမားများ အပေါ် ခေါင်း ပုံဖြတ်သည့် ကြားပွဲစားများ တောင်းခံသော ငွေကြေးကို မပေးနိုင်သဖြင့် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လုပ်ကိုင်သူ အရေအတွက် နည်းပါး ခဲ့ သည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တာဝန်စတင်ယူသည့် နောက်ပိုင်း သမ္မတကိုယ်တိုင် ပြည်ပရောက် မြန်မာများ အရေး ကို ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းများထဲ၌ အရေးတယူ ထည့်သွင်း ပြောကြားလာခဲ့ရာ မြန်မာပြည်သား များအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံသားများ၏ ဆက်ဆံရေး လည်း တ ဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာသည်ကို တွေ့ရသည်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာအစိုးရ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး ဘန်ကောက် မဟာချိုင်ဒေသ ရှိ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သမားများနှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောကာ ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး နောက်တွင် ထိုင်း အစိုး၏ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ပတ်သက်သည့် မူဝါဒ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာသည်။
ထိုင်း အလုပ်ရှင်များ ဘက်က ခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့သော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား များအတွက် အခြေခံလုပ်ခလစာကို တပြေးညီ သတ်မှတ် ပေး ခဲ့သည်။ ယခင်က တနေ့လျှင် ဘတ် ၁၀၀၊ ၁၃၀၊ ၁၅၀ စသည်ဖြင့် အလုပ်ရှင်ပေါ် မူတည်၍ ပေးနေသော လစာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ မှစတင်၍ ဘတ် ၃၀၀ စီ တပြေးညီ ခံစားခွင့် ရရှိမည်ဟု ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုကြေညာချက် အ မှန် တကယ် အကောင်အထည် ဖော်မဖော်ကိုမူ စောင့်ကြည့်ရဦးမည်။
လက်ရှိတွင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေသော သန်းနှင့်ချီသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံသားများ၏ ဆက် ဆံ ရေးပြောင်းလဲ တိုးတက်လာသည်ကို မြင်တွေ့ ကြားသိရသည်။ ထိုင်းရုပ်သံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်းကို အသားပေး ဖော်ပြ လာ သည်မှာလည်း ထိုင်းနှင့် မြန်မာ တပြေးညီဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က ပြသသည့်သဘောဟု ယူဆသည်။
အလားတူ ထိုင်းနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်များရှိ မြန်မာစာ ဌာန၊ မြန်မာစာ သင်တန်းချိန်များတွင် တက်ရောက်သင်ကြား လိုသူ ကျောင်းသားများ များ ပြား လာသည်ဟုလည်း ဝမ်းမြောက်ဖွယ် ကြားသိရသည်။
ထိုသို့ ပြောင်းလဲလာမှုများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြောင့်သာ မကဘဲ အမေရိကန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများ၏ ပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ် သိမ်း လိုက်ပြီးနောက် တိုးတက် ပြောင်းလဲ လာတော့မည့် မြန်မာပြည်၏ စီးပွားရေး ကဏ္ဍများတွင် ဝင်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ် လိုသော ထိုင်းအစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့်လည်း သက်ဆိုင်နေသည်ဟု မြင်သည်။ ယခင်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် ရေမြေချင်း ထိစပ်နေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံပြီးလျှင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှု တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံး ရှိခဲ့သည်။ လာမည့် ၂၀၁၅ တွင် လက်ရှိထက် နှစ်နိုင် ငံကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး အနည်းဆုံး ၃ ဆခန့် တိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟု ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။
မြန်မာပြည်နှင့် ရေရှည် အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်စေရန် ထိုင်းအစိုးရဘက်က မြန်မာအလုပ်အမားများ အရေးကို ချန် လှပ်မထားခြင်း၊ မြန်မာပြည်နှင့် ပတ်သက်သည့် အရေးကိစ္စများကို အရေးတယူ ပြုလာခြင်းတို့မှာ ထူးခြားသော အကြောင်းကိစ္စ တရပ်မ ဟုတ်ပေ။ ထိုင်းရုပ်သံများတွင် မြန်မာပြည်အကြောင်း အသားပေး ဖော်ပြလာသည်မှာလည်း ရေမြေ တောတောင် သဘာဝ ကြွယ်ဝသော မြန်မာပြည်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးကျေးဇူး များမည့် လုပ် ငန်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ဧရာဝတီက ကြိုဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ယခင်က တဆင့်နှိမ့် ဆက်ဆံခဲ့သော ထိုင်းနိုင်ငံသားများ၏ အမြင် ပြောင်းလဲ လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သော် လည်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမဝင် နေထိုင် အလုပ်လုပ်နေသည့် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ သန်းနှင့်ချီ၍ ကျန်ရှိနေသေးသည်။ အလုပ် သမားအ ခွင့်အရေး တပြေးညီ ခံစားခွင့် ရှိလာပြီဟု ဆိုရာတွင် တရားမဝင် နေထိုင် အလုပ်လုပ်နေရသည့် အလုပ်သမားများ ပါ ဝင်ဦးမည် မဟုတ်ပေ။
ထို့အပြင် မကြာသေးခင်က ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီး၏ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လျှင် နေရင်းနိုင်ငံ ပြန်ပို့မည်ဆို သော ကြေညာချက်ကြောင့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ တရားဝင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ရန် ကိစ္စ ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များက သုံးသပ်လာကြသည်။ အလားတူ တရားဝင် လက်မှတ် ရရှိရန် ငွေကြေး ကုန်ကျစရိတ် မတတ်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ်များ မရှိခြင်း၊ လက်မှတ်ရရှိရန် အလုပ်လုပ်ရာ ဒေသမှနေ၍ တနယ်တကျေးသို့ အ လုပ်ဖျက်၍ မသွားလို ခြင်း စသည့် ခက်ခဲသော အကြောင်းရင်းများလည်း ရှိနေသေးသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများက ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများ မျှတစွာ ရရှိစေရန်နှင့် ထိုင်းအလုပ်ရှင်များ၏ ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုမှ ကင်း လွတ်စေရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားကိုး တိုင်တည်သကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကလည်း ထိုက်သင့်သည့် ပြော ဆိုဆွေး နွေးမှုနှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ရှိခဲ့သည်ကို မြင်တွေ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် အဓိက တာ ဝန်ရှိသူ မဟုတ်ကြောင်း သတိချပ်သင့်သည်။
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အရေးကို အမှန်တကယ် ပြောဆို၍ တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်ရမည့်သူမှာ အစိုးရ တာဝန်ယူ ထားသူ သမ္မ တဦး သိန်းစိန် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှသာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အရေး ထိရောက်ပေလိမ့်မည်၊ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ အဓိက လုပ်ဆောင်ရမည့် အရေးကိစ္စ ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် မြန်မာနှင့် ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး တိုးမြှင့်ရန် စာချွန်လွှာများ လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည့် နည်းတူတိုင်း ပြည် ၏ နှလုံးသားနှင့် တူသော ပြည်သူများအား ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ သဘောထားကာ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ၎င်းတို့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ရပ်တည် ရှင် သန်နိုင်ရေးအတွက် ထိထိရောက်ရောက် ဥပဒေပြု ဆောင်ရွက်သင့် ပါကြောင်း ဧရာဝတီက တိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ July,31st,2012
( 38 )ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု စိုးရိမ်စာရင်းထဲ မြန်မာ ရှိနေဆဲ
( 37 )UN envoy visits site of Myanmar ethnic clashes
( 36 )မြန်မာပြည် ဒေသတချို့တွင် မိုးများ၍ ရေကြီး
( 35 )Indonesia Monitoring Rohingya Situation
( 34 )မြန်မာသံအမတ်သစ်ခန့်အပ်လွှာ အိုဘားမား လက်ခံ
( 33 )OIC to take steps to save Muslims of Myanmar
( 32 )ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ကျွန်းသစ်ထုတ်လုပ်မှု ရာနှုန်းပြည့် လျှော့ချမည်
( 31 )Targeting Rohingya Muslims in Burma
( 30 )သောင်တင်နေသည့် မြန်မာလုပ်သားများ မြဝတီ ပြန်မည်
( 29 )Violence Against Myanmar's Rohingya in Sights:
( 28 )ရခိုင်ပါတီနှစ်ခု ညှိနှိုင်းရန် ALD အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုဆို
( 27 )Myanmar govt rejects concerns on crackdown
( 26 )လယ်ယာကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ညီလာခံတွင် နိုင်ငံခြားသား ပိုများ
( 25 )Suu Kyi looking to visit next spring
( 24 )မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာမရှိလို့ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီပြောကြား
( 23 )RI ready to fight for Rohingya
( 22 )အလွဲသုံးစားမှုဖြင့် မီးရထားဝန်ထမ်း ၄၄ ဦးကို တာဝန်မှ ရပ်စဲ
( 21 )Bad Days in Burma
( 20 )လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်အမှု သြဂုတ် ၃ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံကြားနာမည်
( 19 )UN begins Myanmar investigation
( 18 )မစ္စတာ ကင်တားနား လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေလေ့လာ
( 17 )Five held with gun, Yaba tablets
( 16 )အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မှု တိုးတက်ရန် နိုင်ငံတကာနှင့် ချိတ်ဆက်မည်
( 15 )Burma rejects Muslim crackdown concerns
( 14 )ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး သေချာစွာလေ့လာဖုိ့ ကင်တားနားကို တောင်းဆို
( 13 )4,000 Muslim Rohingyas killed, 8,000 missing in Myanmar
( 12 )ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ပြည်ကို ချယ်ရီပွင့်ချိန် သွားမည်
( 11 )UN human rights envoy probes ethnic clashes in Myanmar
( 10 )ကင်တားနား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေနဲ့တွေ့
(9)Rohingyas are not citizens: Myanmar minister
( 8 )စစ်ကိုင်းမှာ လယ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ
(7)Britain must defend Burma's Muslim Rohingyas
(6)စိုင်းနော်ခမ်း လက်ထောက် လွှဲပေးဖို့ တရုတ်တောင်းဆို
(5)UN’s Quintana to Assess Arakan Strife
(4)စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ မမျှတမှု သမ္မတကြီးထံ တိုင်ကြား
(3)Myanmar's Suu Kyi plans cherry blossom visit to Japan
(2)စက်သုံးဆီဆိုင် ဖယ်ရှားဖို့ သာစည်မှာ ဆန္ဒပြ
( 1 )UN rights envoy probes ethnic clashes in Myanmar
ပေါက်တောမြို့နယ် ကြံခင်း ကျေးရွာမှ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ရခိုင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဈေးဝယ်ပြီး အပြန် စစ်ကဲပြင် ( တောင်) ရွာအနီး တွင် မုဒိမ်းကျင့်ခံရကြောင်း ကျေးရွာသားများက သတင်းပေး ပို့သည်။
မုဒိမ်းကျင့်ခံရသူ အမျိုးသမီးမှာ ကြံခင်းကျေးရွာမှ (အဘ) ဦးကျော်လှစိန်၊ အမိ ဒေါ်ယိုင်စိန်ဦးတို့ သမီး (မ——— ) ၃၂ ဖြစ်ကြောင်း သိ ရ သည်။
မုဒိမ်းကျင့်သောသူများ အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူများမှာ စစ်ကဲပြင် (တောင်) ရွာမှ ဟာလူဆော အဖနာမည်က ဂျီရာအာမာန် အပါအ၀င် နောက် ထပ် (၂) ဦး ဖြစ်ကြောင်း ရွာသားများက ပြောသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသမီးသည် ဇူလိူင်လ ၂၇ ရက်နေ့က အခြေအနေ အေးချမ်းပြီဟု ဆိုကာစစ်တွေမှ နေ ဈေးဝယ်၍ ရွာကိုပြန်သောအခါ ကုတိုး လှေမှာ ချောင်းဝ ရွာဆိပ်တွင် ရပ်သဖြင့် ထိုနေရာမှ အနီးအနားတွင်တည်ရှိသော ရွာသို့ ခြေလျင် လျောက်ပြန်စဉ် စစ်ကဲပြင် ရွာမှ အဆိုပါ မွတ်ဆလင် (၃) ဦးက လမ်းမှ တားကာ ဓါးနန့်ထောက်ပြီး ခေါ်ယူသွားက မုဒိမ်းပြုကျင့်ခဲ့ သည် ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ ညနေ (၆) နာရီက ပေါက်တောမြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ ဆက် သွယ် မေးမြန်းရာ မုဒိမ်းမူ ဖြစ်ပွား ကြောင်း သတင်းအရ ရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူများမှ အဆိုပါ ကျေးရွာ သို့ စက်လှေဖြင့် သွားရောက် စစ်ဆေးနေကြောင်း၊ တာဝန်ရှိသူများ မရောက် သေးသဖြင့် အမူ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျ မပြောနိုင်သေးကြောင်း တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြော သည်။
ယခုအခါ ကျူးလွန်သူထဲမှ တစ်ဦးကို ဖမ်းမိထားပြီး ယခုအခါ စစ်တွေသို့ ခေါ်ယူလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမည် မဖေါ်လိုသူ စစ်တွေမှ ရဲတာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာ အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တာနာ ရောက် ရှိနေ စဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တရပ် ယနေ့ ကျင်းပသည်။
နေ့လယ် ၁ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံး အဆောက်အအုံတွင် မစ္စတာ ကင်တာနာ အပါအ၀င် နိုင်ငံ တကာ သံရုံးများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ တက်ရောက်သော သတင်းစာ ရှင်း လင်းပွဲ၌ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ရှင်းလင်း ပြောဆို ခြင်း ဖြစ်သည်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများအတွင်း လူ ၇၇ ဦးသေဆုံး၍ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ခြောက်သောင်း ကျော်ရှိနေပြီး အ ရေး ပေါ်အကူအညီနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အကူအညီများ လိုအပ်နေသည်ဟု ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပြောကြားသည်။
ထို့နောက်၎င်းက ဆက်လက်၍ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာက ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ်တဦး မေလ ၂၈ ရက်က အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ် ခံရမှုနှင့် ဆက်နွယ်ပြီး စတင်ခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၃၁ ဦး၊ ဘင်္ဂါလီ ၄၆ ဦး စုစုပေါင်း ၇၇ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူ ရ ခိုင်လူမျိုး ၅၀၊ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ၆၂ ဦး စုစုပေါင်း ၁၁၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်းသည်။
“ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေက ကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့ နေထိုင်နေရတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေ မှာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရတဲ့ ရခိုင်တိုင်း ရင်း သား အရေအတွက်က ၈၀၃၁ ဦး၊ ဘင်္ဂါလီ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူ အရေအတွက်က ၅၃၃၉၀ ရှိပါတယ်”ဟုလည်း ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး က ဆိုသည်။
ပဋိပက္ခများသည် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာရသည်အထိ ဆိုးရွားခဲ့ကြောင်း၊ စစ်တွေမြို့တွင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၅၈ ခုဖွင့် လှစ် ထား ရပြီး ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၆၁၄၂၁ ဦး ရှိကြောင်း၊ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့် မယုံကြည်မှုများရှိ နေကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောဆို သည်။
ပဋိပက္ခများကြောင့် အဆောက်အအုံ ၄၈၂၂ လုံး၊ ဗလီ ၁၇ ခု၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၄ ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း ၃ ကျောင်းပျက်စီး သွားခဲ့ သည်ဟု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများအတွင်း ကုလသမဂ္ဂနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ၀န် ထမ်းများကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ရှင်းလင်းသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ လူ ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ကာ တဦးကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ် ကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးထားသော ၉ ဦးမှာမူ ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်စေရန် လှုံ့ဆော်သော အထောက်အထားများတွေ့ရှိထား၍ တရားဥပဒေ အရ အရေးယူ မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုသည်။
ပဋိပက္ခများသည် ဘာသာရေး အစွန်းရောက်များ၏ လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်နှင့်ဘင်္ဂါလီ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု စလုံးသည် ငြိမ်း ချမ်း စွာနေလိုကြကြောင်း ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပြောသည်။
မစ္စတာ ကင်တာနာသည် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ် သည် ဟု ရ ခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဝင်းမြိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“မောင်တောရယ်၊ စစ်တွေမြို့ပေါ်ပေါ့။ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေ သွားကြည့်မယ်။ အဲဒီလိုတော့ ကျနော်တို့ လောလောဆယ် သတင်းရထား ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မစ္စတာ ကင်တာနာအနေနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလေ့လာရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ် အတွင်း အစိုး ရတာဝန်ရှိသူများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ အရပ်ဘက်လူမှုကူညီရေး ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တ၀န်း၌ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ထောက်ခံသည့် အထိမ်းအ မှတ်အဖြစ် နိုင်ငံတော်အလံကို ဂုဏ်ပြု လွှင့်ထူ ကြိုဆို နေကြ ကြောင်းသိ ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကို စစ်တွေ၊ မြောက်ဦး၊ မင်းပြား၊ မောင်တော၊ ဘူး သီးတောင်၊ ပေါက်တော စသည့် မြို့နယ်များတွင် ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့မှ စတင် လွှင့်ထူခဲ့ပြီး တောင်ကုတ်မြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ရက် ခန့်က စတင် လွှင့်ထူထားကြောင်း၊ ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန် အောင် စသည့် မြို့နယ် များ တွင်လည်း လွှင့်ထူရန် ပြင်ဆင်နေကြကြောင်း ရခိုင် ဒေသခံ များက ပြောသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည် များဆိုင်ရာ မဟာမင်း ကြီး Mr. Antonio Guterres နှင့် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ က တွေ့ဆုံစဉ် ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ မဟုတ်ဘဲ ခိုးဝင်လာသူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အား လက်ခံ ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ UNHCR သို့ အပ်နှံ၍ ဒုက္ခသည် စခန်းများ ဆောက်ပေးပြီး တတိယ နိုင်ငံက လက်ခံလျင်ပို့ဆောင် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများကို တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘဲ ခိုးဝင်လာသည့် ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများကို လက်ခံရန် မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သမ္မတက ပြောခဲ့သော်လည်း UNHCR အကြီး အကဲက ရန်ကုန်မြို့၌ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်စဉ် သမ္မတ၏ ပြောဆိုချက်ကို ပယ်ချခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်အလံကို မော်တော်ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုက်ကား၊ စက်ဘီး စသည့် ယာဉ်များနှင့် နေအိမ်များ၌ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့က စတင် လွှင့်ထူ ထားကြကြောင်း၊ အလံလွှင့်ထူခြင်း ကိစ္စကို မည်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်း များကမှ စည်းရုံးခြင်း မဟုတ်ဘဲရပ်မိ၊ရပ်ဘ များ၏တိုက် တွန်းမှုနှင့် ပြည်သူတို့က မိမိတို့ အသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့် လွှင့်ထူခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြောက်ဦး မြို့ခံ ဦးထွန်းလှိုင်က ပြောသည်။
“သမ္မတကြီးက ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်က ရပ်တည်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုတဲ့ အထိန်း အမှတ်ရယ်၊ ကျနော်တို့ ရခိုင် ပြည်သူတွေ ကလည်းပဲ သမ္မတကြီးနဲ့ တထပ်တည်း ရှိတယ်ဆိုတာရယ် ပြသတဲ့ အနေနဲ့ နိုင်ငံ တော် အလံကို ၉ ရက် တိတိ လွှင့်ထူ ကြတာ ပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
စစ်တွေမြို့၌ နိုင်ငံတော်အလံကို ဇူလိုင်လ၂၁ ရက်နေ့တွင် စတင်လွှင့်ထူထားကြောင်း၊ ပြည်သူ တရပ်လုံးက ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရှိသည် ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ သမ္မတ၏ ပြောဆိုချက်ကို အစိုးရ အနေဖြင့်လည်း တရားဝင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပေး သင့်သည်ဟု ရခိုင်ပြည် သူများနှင့် နိုင်ငံ ရေး အသိုင်းအ၀န်းက လိုလားနေကြကြောင်း သိရသည်။
“သမ္မတ ပြောသလိုပဲ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်း ကြေညာချက် တခု အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ရင် ပိုပြီးတော့ ကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ အသံတွေကို နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ဆီက ကြားနေရပါတယ်” ဟု ၀ံလက် ကျေးလက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်း အဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဦးခိုင်ကောင်းစံက ပြောသည်။
ရသေ့တောင် မြို့နယ်တွင် အလံလွှင့်ထူမှု မရှိသေးကြောင်း၊ သို့သော် သမ္မတ၏ ပြောဆိုချက်ကို ထောက်ခံသည့် စာများ ရေးသားထား သည့် စာရွက်၊ စာတမ်းများကို ရပ်မိ၊ ရပ်ဘများ၊ လူငယ်များက ပြည်သူများထံ ဖြန့်ဝေ နေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ရခိုင်တိုင်း ရင်းသား များ တိုးတက် ရေးပါတီ (RNDP) ၏ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်က ရှင်းပြသည်။
ရခိုင်ဒေသ အကြမ်းဖက်မှု စတင်ခဲ့သည့် မောင်တောမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင် မြို့တို့တွင်လည်း နိုင်ငံတော် အလံလွှင့်ထူခြင်းကို ဇူလိုင် ၂၁ ရက် နေ့က စတင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုဒေသများ၌ ယခုအခါ တည်ငြိမ်စ ပြုနေပြီ ဖြစ်သည့်တိုင် စာသင်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း မရှိသေး ကြောင်း ဘူးသီတောင် မြို့ခံ ဦးထွန်းအောင်သိန်းက ပြောသည်။
“ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားတာ ၂ လ ပြည့်တော့မယ် ဆိုတော့ သြဂုတ်လ ထဲမှာ ပြန်ဖွင့်နိုင်အောင် အာ ဏာပိုင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်း နေပါတယ်၊ ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေ လုံခြုံရေး အပြည့်အ၀ ရရှိရေး အတွက်ပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင် မြို့တို့ရှိ စာသင်ကျောင်းများ အားလုံးကို ဇွန်လဆန်းမှ စတင်ပိတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆရာ၊ ဆရာမ များ သည် လုံခြုံရေး စိတ်မချရသည့် အတွက် ထိုဒေသ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စိုးရိမ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေမြို့ရှိ စာသင်ကျောင်း အများစုမှာ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္က သိုလ် တို့လည်း ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းကားများတွင် လုံခြုံရေးများ လိုက်ပါပေးနေကြောင်း၊ စစ်တွေ တက္ကသိုလ် ကို သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင် စီစဉ်နေကြောင်း ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖွဲ့ စည်း ထားသော ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဦးဝင်း မြိုင်က ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများကြောင့် ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၆ သောင်းကျော် ရှိနေရာ အရေးပေါ် အကူအညီနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အ ကူ အညီများ လိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်း နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ် ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးက ယနေ့ နေ့လယ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ရန်ကုန် ပြည်လမ်းရှိ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရုံအဆောက်အအုံတွင် ကျင်းပပြီး ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာလူ့အ ခွင့် အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တာနား၊ ရန်ကုန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ သံရုံးများ၊ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် အပြည် ပြည်ဆိုင် ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးက ပဋိပက္ခ များသည် ဘာသာရေး အစွန်းရောက်များ၏ လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပြီး ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံးသည် ငြိမ်းချမ်း စွာ နေလို ကြကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မောင်တောဒေသ ပဋိပက္ခများကြောင့် နေအိမ်များ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရသည့် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများသည် မြို့ပေါ်ရှိဘုန်းကြီးကျောင်း များ နှင့်အလယ်သံကျော် ဘုန်းကြီးကျောင်း တို့တွင် ကူညီစောင့်ရှောက် ပေးထားကြောင်း၊ ၎င်းတို့အတွက် စားနပ် ရိက္ခာ လို အပ် နေ ကြောင်း ဒုက္ခသည်အရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူ ဦးခိုင်ကောင်းစံက ဆိုသည်။
အ၀တ်အထည်၊ စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ ဆန် စသည့် ပစ္စည်းများ အတိုင်းအတာတခုအထိ လုံလောက်မှု ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အသီးအရွက်၊ ငါး ခြောက် စသည့် စားသောက်ကုန်များနှင့် အိပ်စရာ အခင်းများ လိုအပ်နေသေးကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ရခိုင်ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် လူ ၈၀ ၀န်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပြီး ရာဂဏန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ သောင်းချီ၍ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း သိ ရသည်။ ထိုပဋိပက္ခများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် စစ်တွေ၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ၊ သံတွဲ စသည့် မြို့နယ် များတွင် ညမထွက်ရ အမိန့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကြေညာ ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ထိုနေ့မှ စ၍ အရေးပေါ် အခြေအနေလည်း ထပ်ဆင့် ကြေညာခဲ့သည်။
ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခ တလ ပြည့်မြောက်သည့် ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့အပါအ၀င် ရခိုင်ဒေသ တ၀န်းလုံး၌ သေဆုံးခဲ့ ရသူ များအ တွက် ၀မ်းနည်းခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် သာသနာ့ အလံများလွှင့်တင်၍ ဂုဏ်ပြု ခဲ့ကြ သေးသည်။
ဘင်္ဂါလီ ၁၂၀၀ ကျော် မြန်မာဘက် ပြန်ပို့ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ၀င်ရောက်လာ၍ မြန်မာ နိုင် ငံဘက် ပြန်ပို့ခဲ့ရာ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် ယနေ့အထိ ၁၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဆက်လက် ၀င်ရောက် လာနေဆဲလည်း ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။
ယင်းဘင်္ဂါလီများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ ကမ်းခြေစောင့်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်ရာ ပြီး ခဲ့ သည့် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ကလည်း ဘင်္ဂါလီ ၁၁ ဦးကို ပြန်ပို့ခဲ့သေးသည်ဟု တာခ်နာ အခြေစိုက် အမှတ် ၄၂ နယ်ခြားစောင့် တပ် (BGB) က ဗိုလ်မှူး ဇျာဟိဒ် ဟာဆန်းက ပြောကြားကြောင်း ကောက်စ်ဘဇားမြို့ သတင်းစာများက ဖော်ပြသည်။
“စုစုပေါင်း ၁၁ ဦးကို BGB ကင်းလှည့် တပ်ဖွဲ့က နေ့လယ် ၂ နာရီမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၃ နာရီမှာတော့ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထား မှုနဲ့ အစား အသောက်တွေ ပေးပြီး နေရပ်ပြန်လွှတ် လိုက်တယ်”ဟု ဗိုလ်မှူး ဇျာဟိဒ် ဟာဆန်း က ပြောဆိုသည်။
အမည်မဖော်လိုသော တာခ်နာ အခြေစိုက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ထောက်လှမ်းရေး တဦးကလည်း ဖမ်းမိသူများကို ပြန်ပို့ရာတွင် မြန်မာ နယ်စပ် ဒေ သလုံခြုံရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေး(နစက) အဖွဲ့ကို အကြောင်းကြား၍ တရားဝင်ပြန်ပို့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ လာလမ်းအတိုင်း လှေပေါ်တင်ပြီး ပြန် လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထပ်မံ လာရောက်နေသူများလည်း ရှိကြောင်း ပြောသည်။
“သူတို့လာတဲ့ လှေပေါ်ကို ပြန်တင်ပြီး ပင်လယ်ကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ တော့ မြန်မာဘက်က လူတွေ အရင် ထက် ပိုဝင်လာနေတယ်။ မိန်းမတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။ ယောက်ျားတွေ အများကြီး လာနေတယ်” ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြန်လွှတ်လိုက်သူ တချို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသများသို့ မပြန်ဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင်းသို့ တနည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည် ၀င်ရောက် ကြ ကြောင်း၊ စစ်တကောင်း၊ ဒါကာ အစရှိသည့် နေရာများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသူများပင် ရှိကြောင်း တာခ်နာ အခြေစိုက် ဘင်္ဂ လားဒေ့ရှ် ထောက်လှမ်းရေး က ဆက်ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင်း ရောက်နေသည့် ဘင်္ဂါလီများကို BGB များက လမ်းမပေါ်၊ ကားပေါ်များအထိ လိုက်လံ ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိသည် ဟု တာခ်နာ မြို့ခံ တဦးကလည်း ပြောသည်။
ထိုသို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ ၀င်ရောက်ရန် ကြိုးစားနေသူများတွင် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့များနှင့် ဆက်နွယ် သူ များ လည်း ပါဝင်နိုင်သည့်အတွက် စိုးရိမ်မှုရှိကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၀န်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာဆီနာက ပြောဆို ထား သည်။
ရှိတ်ဟာဆီနာသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့တွင် ကျင်းပနေသော အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်စဉ် Sund ay Express သတင်းစာ၏ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားရာ၌ ထိုသို့ ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက် ထွက်ပြေးလာသူများကို ပြန်မပို့ရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အမေရိကန် က တိုက် တွန်းထားသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် နယ်စပ်ခြင်း ထိစပ်လျက်ရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မှစ၍ ပဋိပက္ခ အကြမ်းဖက် မှု များ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ ၇၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အိုးအိန်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်ရသူပေါင်း သောင်းနှင့်ချီ ရှိကြောင်း တရားဝင် စာရင်း များအရ သိရသည်။
ကျောင်းသား ၃ ဦး ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဖြင့် သံတွဲအကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံနေရ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲတွင် လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုယူဆ၍ တရားစွဲဆိုထားကြောင်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ဖြင့် ကျောင် သား(၃)ဦးအား သံတွဲအကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီး ထိန်း သိမ်းထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သံတွဲမှ ညီမင်းခန့်၊ ခိုင်ဇော်ဆန်း၊ နိုင်ရဲဦး၊ ဂွမြို့နယ်မှ သန့်စင်ဖြိုး ကျောင်းသား(၄)ဦးအား ဇူလိုင်လ(၂၀)ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးသွားပြီး (၂၆)ရက်နေ့ ရုံးထုတ်ရာတွင် သန့်စင်ဖြိုးမှာ အာ မခံချက်ဖြင့် ပြန်လွတ်လာပြီး လက်ရှိတွင် ကျန်(၃)ဦးမှာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ဖြင့် သံတွဲထောင်တွင်ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကျောင်းသား(၄)ဦးအား ဇွန်လ(၁၂)ရက်နေ့က ပထမ တစ် ကြိမ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ညနေ(၆)နာရီခန့်တွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
“ ညီမင်းခန့်တို့က (၁၁)ရက်နေ့တွင် သပြုချိုင်ကို ကားအငှားလိုက်သွားတာ၊ ဖမ်းဆီးခံရတာ မှာပါ တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း လိုက်သွား တာ၊ ပြန်လာတော့ ညနေ(၆)နာရီ ကျော်တာနဲ့ အိမ်ကိုသူပြန်မလာနိုင်တော့ဘဲ ပဒဲကိုက သူငယ် ချင်းအိမ်မှာ အိပ်တာ၊ (၁၂)ရက်နေ့က အဲ့ ဒီအိမ်မှာလာခေါ်သွားတာ၊ (၁၃)ရက်နေ့ ညနေ(၁၂)နာရီမှာ ရဲတွေကိုယ်တိုင် လာပို့သွားပါ တယ်။ ” ဟု ညီမင်းခန့် မိခင် ကပြောသည်ဇွန်လ(၂၀)ရက်နေ့ ညနေ(၆)နာရီ တွင်ဒုရဲအုပ် စိုးလွင်မှ ပြန်လာပို့မည်ဟု ခေါ်သွားကာ ယခုထက်ထိ ဖမ်းဆီးခံနေရကြောင်း သူက ဆက် ပြောသည်။ ညီမင်းခန့်၊ ခိုင်ဇော်ဆန်း၊ နိုင်ရဲဦး၊ သန့်စင် ဖြို့တို့ကိုလည်း အဆိုပါနေ့က ဖမ်း ဆီးခံခဲ့ရပြီး သန့်စင်ဖြိုးမှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော်လည်း ကျန်သုံးဦးမှာ ဆက်လက် ဖမ်းဆီး ခံနေရ ဆဲဖြစ် သည်။
ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)မှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ(သို့) နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝမ်ပိပြားရေးကို ထိခိုက်သည့်ပြစ်မှုကို တစ်ဦးတစ် ယောက် သောသူက အများ ပြည် သူ ကိုသော်လည်းကောင်း၊ လူတစ်စုကို သော်လည်းကောင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း အကြံရှိလျှင် သို့မဟုတ် ထိုသို့ဖြစ်စေ လျှင် ဤပြစ်မှု မြောက်သည်ဟု သိ ရသည်။
ညီမင်းခန့်နှင့် ဖမ်းဆီးခံနေရသော ကျောင်းသားများသည် သပြုချိုင် ဆိပ်ကမ်းတွင် ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ ထုတ်ဝေထားသောစာရွက် တစ်ရွက် ကို ဈေးဆိုင်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သွားရောက်ပြသခြင်းကို တရားလိုဘက်မှ လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆ၍ တ ရားစွဲဆို ထား ကြောင်း သိရသည်။
တရားလိုမှာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးသောင်းလေးဖြစ်ပြီး သူ၏ဇနီးမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ် ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ လေးဦးအား ပထမတစ်ကြိမ်ဖမ်းဆီးခံရပြီး ၇ ရက်မြောက်နေ့တွင် ဒုတိယတစ်ကြိမ် ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ရာ ယခု လက်ရှိ တွင် တရာလိုဖြစ်သူ ဦးသောင်းလေး၏ ဇနီး မူဆလင်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးက ငွေကြေးပေးကာ တဘက်သတ် ပြစ်မှုမြောက် အောင်ဖန် တီးနေခြင်းဟု သံတွဲမြို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုက ဝေဖန်ပြောဆို နေကြောင်းသိရသည်။
အာမခံဖြင့် လွတ်မြောက်လာသူ သန့်စင်ဖြိုးမှာ အသက် ၁၉ နှစ် ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသားဖြစ်ပြီး ညီမင်းခန့်( အသက်- ၂၀) မှာ သံတွဲမြို့ ဗောထိ ကုန်းရပ်ကွက်မှ ဦးဘသိန်၏ သားဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ မြန်မာစာ စစ်တွေ အဝေးသင် ပထမနှစ်၊ နိုင်ရဲဦးမှာ သံတွဲ၊သရက်ပင်ကွင်းရွာ ဦးအောင်ထွန်း ကြည်၏ သားဖြစ်ပြီး စစ်တွေ အဝေးသင် သမိုင်ပထမနှစ် နှင့် ခိုင်ဇော်ဆန်း ( အသက်- ၁၇နှစ်)မှာ ၁၀ တန်းကျောင်း သား ဖြစ်ပြီး သံ တွဲ ကြေးနန်း ရုံးမှ ဦးမင်းဇော်၏ သားဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါဖမ်းဆီးခံနေရသူ ကျောင်းသား(၃) ဦးအား လာမည့်သြဂစ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံရုံးချိန်း ထား ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းလင်းကို တောင်ဥက္က လာပ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အ ညီ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ရပ်စဲပေးရန် လက်မှတ်ရေး ထိုးသော လှုပ် ရှားမှု တရပ် စတင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Southern Weekend သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခန်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ကိုယ်စား လှယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမတ် ဦးအောင်သိန်းလင်းက ကုလသမဂ္ဂနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီ မွန်း၊ အမေရိကန် နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် တို့ကို မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေး ဝင် ရောက်နှောင့်ယှက်သူများဖြစ်သဖြင့် အယုံ အကြည် မရှိကြောင်း၊ အမျိုး သား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်သည် ဖခင် အရှိန်အဝါဖြင့် ကျော်ကြား နေသူ ဖြစ်ပြီး NLD ကို ထောက်ခံသူများ သည်လည်း အရူးများသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖြေဆိုထားခဲ့သည့် အတွက် တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒရှင် များက အထက်ပါ လှုပ်ရှားမှုကို စတင် လိုက် ခြင်း ဖြစ်သည်။
ိုထို့အပြင် ဦးအောင်သိန်းလင်းက အများတောင်းဆို မှုကြောင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အမိန့်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းထားသော မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ကြီးကို မဖြစ်မနေ ပြန်စရန်လိုကြောင်း စသည့် အငြင်းပွားဖွယ်အမြင်များကိုလည်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ပြောဆိုခဲ့ သေးသည်။
ဦးအောင်သိန်းလင်း၏ ဖြေဆိုချက်များကို တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒရှင်များက ပြည်တွင်း ဂျာနယ်များမှ တဆင့် ဖတ်ရကြောင်း၊ ယင်းပြော ဆို ချက် များသည် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများကို စိတ်ပျက်စေသဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှရုပ်သိမ်းရန်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းလှုပ်ရှားမှုကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပေဒနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး လှုပ်ရှားမှုကိုဦး ဆောင် သူ တောင်ဥက္က လာပ မြို့နယ်မှ ဦးမင်းအောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဦးမင်းအောင်သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) ပါတီ၏ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခုအခါ NDF မှ နုတ်ထွက်၍ လယ်သမားအရေးတွင် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက် နေသူ တ ဦးဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း ၉၊ ပုဒ်မ ၃၉၆ (ခ) တွင် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်၏ မူလ မဲဆန္ဒရှင်များ အနက် အနည်းဆုံး “တစ်” ရာ ခိုင်နှုန်း က ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို တာဝန်မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုလျှင် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်တန်းချက်ကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ တင်ပြရမည်ဟုအတိအလင်း ပြဋ္ဌာန်းထား ကြောင်း ဦးမင်း အောင်က ထောက်ပြသည်။
“ဦးအောင်သိန်းလင်းက မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ပြန်စမယ်၊ သမ္မတက သူ့ဘာသာသူ ရပ်ဆိုင်းတာလို့ ပြောတယ်။ ပြည်သူတွေကို အရူးတွေလို့ လည်း ပြောတယ်။ အဲဒီလို ပြောတာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် မဲဆန္ဒ ရှင်တွေ စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တင်ပြမှာပါ” ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် မဲဆန္ဒရှင် အနည်းဆုံး “တစ်” ရာခိုင်နှုန်းက တာဝန်မှ ပြန် လည် ရုပ်သိမ်းလိုသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်တန်းချက်များကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဥပဒေနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေး ရမည်ဖြစ်ပြီး စွပ်စွဲချက် မှန် ကန်လျှင် စွပ်စွဲခံရသူသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ဆက်လက် ထမ်း ရွက်စေရန် မသင့်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ပါရှိ သည်။
လက်မှတ်များကို ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် စတင် ကောက်ခံနေပြီး တောင်ဥက္ကလာ မဲဆန္ဒရှင်များ၏ လက်မှတ်ပေါင်း တထောင်ကျော် ရရှိ သည် နှင့် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံသို့ တင်ပြသွားမည်ဟုသိရသည်။
“လက်မှတ် တထောင်ကျော်ရရင် နေပြည်တော်ကို တင်မယ်။ အခုတော့ လက်မှတ် ရာချီပြီး စရနေ ပြီ” ဟု လက်မှတ်ရေးထိုး လှုပ်ရှားမှု ဦး ဆောင်သူ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တဦးက ပြောသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလက တောင်ဥက္ကလာ ၇ ရပ်ကွက်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ရပ်ဆိုင်းထားသော တောင်ဥက္က လာပ ဗလီကြီးကို မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်များထံမှ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲများ ရရှိလိုသဖြင့် ဦးအောင်သိန်းလင်းကပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် ဆွမ်းလောင်း အသင်းများက ၀ိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်သည့်အတွက် ဗလီဆောက်လုပ်မှုကို ရပ်တန့်ပေးခဲ့ ကြောင်း၊ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ် သက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တောင်ဥက္ကလာပ ဒေသခံများအကြား ဦးအောင်သိန်းလင်းကို မကျေမနပ်ဖြစ် ခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
“ဦးအောင်သိန်းလင်းက ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်သာ နိုင်သွားတာ။ တကယ်တော့ ဗလီကိစ္စမှာ က တည်း က မကျေနပ်တာ။ အခု လက်မှတ်ရေး ထိုး လှုပ်ရှားမှုမှာ ၀င်ပြီး လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီ” ဟု တောင်ဥက္ကလာပ ၇ ရပ် ကွက် သား တဦးက ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်း ဦးအောင်သိန်းလင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဇူလိုင် ၂၈ ရက်နေ့ကကြေညာချက်တစောင် ထုတ် ပြန်လိုက်ပြီး ယင်းကြေညာချက်တွင် တရုတ်သတင်းစာသို့ ဦးအောင်သိန်းလင်းက အထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုခြင်းရှိ၊မရှိစိစစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အမှန်တကယ်ပြောဆိုလျှင် ပါတီစည်းမျဉ်းများအရ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။
ဦးအောင်သိန်းလင်းကလည်း တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Southern Weekend China သတင်းစာ အနေဖြင့် ၎င်း၏ ဖြေဆိုမှုကို ဘာသာပြန် လွဲ မှားစွာ ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မိခင်ပါတီအနေဖြင့် အပြစ်ပေးပါက ခံယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်ဟု သိ ရသည်။
ဇွန် ၁၁ ရက်မှ ယနေ့ထိ ပြန်ပို့ ခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၂၀၀ သာရှိကြောင်း BGB တပ်ရင်းမှူး ပြောကြား
ရခိုင်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူ နောက်ပိုင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ ခိုလုံရန် ၀င်ရောက် လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၂၀၀ ခန့်ကို လက် မခံဘဲ ပြန်လည် မောင်းထုတ်ခဲ့သည်ဟု အမှတ် ၄၂ BGB တပ်ရင်းမှူးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းမှာ ရခိုင်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော လူမူရေး မတည်ငြိမ် မူ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဇူလိူင်လ ၂၆ ရက်နေ့ထိ စုစုပေါင်း အရေအတွက် ဖြစ်ကြောင်း တက်ကနက်မြို့ အခြေစိုက် အမှတ် ၄၂ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇာဟိတ် ဟာဆန်က သ တင်းထောက်များသို့ ပြောသည်။
တက်ကနက် မြို့ကို ရခိုင်လို ကယုချောင်းမြို့ဟု ခေါ်ပြီး မောင်တောမြို့နှင့် မျက်နာချင်းဆိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ အမှတ် ၄၂ BGB (Border Guard Bangladesh) တပ်ရင်းသည် မြန်မာနယ်စပ် နတ်မြစ် တလျှောက်ကို လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားသော တပ်ရင်း ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့ကလည်း တက်ကနက်မြို့နယ် နီလာမြို့အနီးမှ လှေဖြင့် နတ်မြစ် ကို ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်လာသူ မြန်မာ နိုင်ငံမှ မွတ်ဆလင် လူမျိုး ၁၁ ဦးထက် မနည်းကို ပြန်လည် ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇာဟိတ် ဟာဆန်က ပြောကြား သည်။
ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့သို့ ခိုလုံရန် ၀င်ရောက်လာသူများမှာ မွတ်ဆလင်များ ဖြစ်ကြပြီး သူတို့အား အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးနှင့် တခြားလိုအပ် ပစ္စည်းများအား ထောက်ပံ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ဟု သူက ပြောသည်။
ရခိုင်တွင် အရေးအခင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် ထောင်ပေါင်းမြောက်များစွာ ထွက်ပြေးလာကြသည်ဟုသတင်းများ တွင်ရေး သားဖေါ်ပြသော်လည်း အမှန်မှာ ၁၂၀၀ ခန့်သာ လှေများဖြင့် ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နယ်စပ်မှာ ကုန်းနှင့် ရေပါ ဆက်စပ် တည်ရှိနေ သဖြင့် မြန် မာဘက်က ၀င်ရောက်လာသူ အ များအ ပြား ကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ တားဆီးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများ အပြောအရ သိရသည်။
မြန်မာသို့ ရောက်ရှိနေသော ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စာ...
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ...
KIO မသင်္ကာမှုဖြင့် အစိုးရစစ်သားများ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မရှိကြောင်း ဝန်...
သျှမ်းဧကရာဇ် စဝ်ဆေခန်ဖှ၏ အင်ပါယာနန်းတော် တရုတ်အ စိ...
မြန်မာ အနောက်ဘက် နယ်စပ်ကို ကွက်ကဲရန် နစက ကွပ်ကဲရေး...
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာအကြား ပါ့စ်ပို့စီးပွားရေးသမားများ အခက်...
သမ္မတနှင့် တိုင်းရင်းသား ပါတီများတွေ့ဆုံမည့် အစီအစဥ...
မြ၀တီတွင် MOU ပုံစံဖြင့် ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ပြု...
ပေါက်တောမြို့နယ်တွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး မုဒိမ်းကျင်...
တောင်ဥက္ကလာ ပြည်သူများ ဦးအောင်သိန်းလင်းကို ကန့်ကွက...
ဇွန် ၁၁ ရက်မှ ယနေ့ထိ ပြန်ပို့ ခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသ...
ပေါက်တောမြို့နယ်ရှိ ကျွန်းစုများတွင် (န.စ.က) စခန်း...
အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ်ကို မွန်နှင့် ရခိုင်ပါတီတု...
နေဗီဆိပ်ကျေးရွာမှ ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦး (၂) ရက်ခန...
သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရာ လူသေ အလောင်း ဆေးမစစ်ဘဲ သဂြိုလ်
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ July,30th,2012
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ July,29th,2012
သံတမန်ဆန်တဲ့ စိစစ်ရေးဌာနနဲ့ ၈၈ ကို အားဖြည့်မယ့် ဂီ...
လယ်သိမ်း မြေသိမ်း စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် လွတ်လပ်မှု ရ...
ဂေါက်ကွင်း အတွက် စစ်တပ်က လယ်သိမ်းမူ နိုင်ငံတော် သမ...
ရခိုင် ပဋိပက္ခ စုံစမ်းရေး ပွင့်လင်းမြင်သာစေရန် ကုလ ...
အဓမ္မမှု ကျူးလွန်သူ ရဲအား တရားဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းမရှ...
ယူအန်နှင့် အိုင်အန်ဂျီအို ဆန့်ကျင် ပိုစတာများ ရဲက ...
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၃၈)
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ July,28th,2012
အရေးပေါ် အခြေအနေ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ကုန်မည်ဟု စစ်တပ်ြေ...
“မရဏ ရှပ်ပြေး” လက်ကမ်းစာစောင် ဗန်းမော်တွင် ဖြန့်ဝေ...
ကလေးစစ်သားအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ရဖ...
ဘူးသီးတောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံ အန်ဂျီအို ၀န်ထမ်း (၃) ဦ...
KIA တပ်စခန်းတစ်ခု နောက်ဆုတ်လိုက်ရ
မြန်မာ အနောက်ဘက် နယ်စပ်ရှိ ရခိုင်ကျေးရွာများ အရေးေ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ July,27th,2012
ကင်တားနား မြန်မာခရီးစဉ် အတွင်း ရခိုင်ကိုလာမည်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၌ တိုက်ပွဲများဆက်ဖြစ် ဒေသခံမ...
NLD စည်းရုံးရေးမှူးတဦး အသတ်ခံရ
အသတ်ခံ နေရဆဲ ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလု...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် မကြာမီ တွေ့ဆုံရန်ရှိသည်ဟု K...
အင်းတော်ကြီးဒေသတွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်၍ အဆောက်အဦးပျက်စီ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ July,26th,2012
တိုင်းရင်းသားဒေသ ဆင်းရဲနိမ့်ကျမှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
ပြည်တော်ပြန် ဥပဒေ ပြဌာန်းရန် မလိုဟုဆို
အစိုးရ စစ်တပ်က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို တမင်ဖျက်ဆီးနေ
တရုတ် ၁၃ ဦးပစ်သတ်မှု တရားခံအဖြစ်ဝန်ခံဖို့လက်နက်ချေ...
တက္ကသိုလ် ကောလိပ် အဆင့် ကျောင်းသား ၉၇၄ ယောက်မှ ငြိမ...
လွိုင်ကော်မြို့တွင် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ...
အထက်ပေါင်းလောင်း ဆည်ကြောင့် ရေလွှမ်းမိုး မည်ကို ဒေသ...
ဦး လဆန်အောင်ဝါ နှင့် ဦးမင်းညို ပူးပေါင်း၍ ဒေသခံမ...
သက်ဝင် လှုပ်ရှားလာတဲ့ လွှတ်တော်